တဖန်သင်တို့၊ | Linux မှ
od_air | | အခြား
အားလုံးပဲမင်္ဂလာပါ။ ကျွန်တော့်နာမည် Odair Reinaldo ပါ။ ဒီဘလော့ဂ်ရဲ့အစိတ်အပိုင်းတစ်ခုဖြစ်ရတာဟာကျေနပ်စရာကောင်းပြီးအခွင့်ထူးတစ်ခုပါပဲ။ ပထမဆုံးအကြိမ်ငါရေးပြီးသင်သဘောကျမယ်လို့မျှော်လင့်ပါတယ် ...
လွန်ခဲ့သောတစ်နှစ်ခန့်ကကျွန်ုပ်တွေ့ဆုံခဲ့သည် Ubuntu ကိုငါကြိုးစားပြီးငါကြိုက်တယ် အချိန်တိုအတွင်းမှာ Ubuntu ဟာ Linux ပဲမဟုတ်ဘဲဖြန့်ချီမှုအမျိုးမျိုးလည်းရှိသည်ကိုငါသဘောပေါက်ခဲ့သည်
ထိုအခါငါ installed Linux Mint, ဒါပေမယ့်ငါတဖန်ပျင်းတယ်နှင့်အခြားကြိုးစားရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ ငါရောက်ရှိခဲ့အများအပြားစမ်းသပ်ခြင်း ချစ်သူ ပြီးတော့ငါအဲဒီမှာနေမယ်လို့ထင်ခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့လိုမဟုတ်ဘူး။
ထို့နောက်လာပါ ပုသိမ် ထပ်ခါထပ်ခါငါနေမည်ဟုထင်သော်လည်းတဖန်ပြောင်းလဲပြန်လေ၏။ ကျွန်ုပ်သည်ဗိုင်းရပ်စ်ပိုးပြင်းထန်သောဖြစ်ရပ်ဖြစ်သော်လည်းသေချာသည် ငါတစ်ယောက်တည်းမဟုတ်ဘူး
OS တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့ install လုပ်တိုင်းလိုအပ်သောအရာ၊ ပျော်ရွှင်မှုအတွက်သို့မဟုတ်စူးစမ်းလိုစိတ်ကြောင့်အသစ်တစ်ခုကိုကြိုးစားကြိုးစားသည်။ ဒါပေမယ့်အမှန်တရားကတော့ GNU / Linux ကိုသုံးတဲ့လူအများစုကမတူညီတဲ့ဖြန့်ဝေမှုအမျိုးမျိုးကိုဖြတ်သန်းခဲ့ရတယ်။
တစ်ချိန်ချိန်ကျွန်ုပ်တို့အားလုံးနီးပါးတူညီကြသည်၊ ကွာခြားချက်မှာ package manager၊ desktop ပတ်ဝန်းကျင်တွင်၊ wallpapers များ၌ဖြစ်သည်။
ငါဟာအထီးကျန်တဲ့အမှုဖြစ်ကောင်းဖြစ်ကောင်းမဖြစ်နိုင်ဘူး၊ ဒါကြောင့်မင်းကိုမင်းဘယ်နှစ်ယောက်အသုံးပြုခဲ့တယ်ဆိုတာကိုမေးဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ ငါမှတ်ချက်များအတွက်သင့်ရဲ့အဖြေကိုစောင့်ဆိုင်း။
ဤတွင်ကျွန်ုပ်၏ပစ္စည်းဖြစ်ပါသည်။ (နိုင်ရန်အတွက်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်မှတ်မိတော့မည်မဟုတ်သောကြောင့်)
1 ။ Ubuntu ကို
၂။ Linux Mint
၇။ Puppy Linux
13. မူလတန်း OS
၁၅။ TinyCore Linux
22 ။ Manjaro Linux ကို
ဆောင်းပါး၏လမ်းကြောင်းအပြည့်အစုံ - Linux မှ » အခြား » တဖန်သင်တို့၊
131 မှတ်ချက်များ, သင့်စွန့်ခွာ
ပက်ထရစ် Bustos ဟုသူကပြောသည်
ငါအရင်ကထက်အများကြီး distros တွေအများကြီးတပ်ထားတယ်၊ ဒါကြောင့်ငါ pc မှာအလုပ်လုပ်တဲ့သူတွေကိုအနည်းဆုံး ၃ ရက်လောက်ထားပေးတယ်။
Patricio Bustos အားပြန်ပြောပါ
ကြိုဆိုပါတယ် အသိုင်းအဝိုင်းသို့သင်၏နောက်လှူဒါန်းမှုများတွင်သင်ကြိုက်နှစ်သက်သော distro ၌ပြproblemsနာများကိုမည်သို့ဖြေရှင်းရမည်ကိုသင်ခန်းစာများထည့်သွင်းပါကကောင်းပေလိမ့်မည်။ 🙂
Ubuntu, Tuquito (Ubuntu ကို အခြေခံ၍ အာဂျင်တီးနား distro)၊ Linux Mint, Kubuntu, PCLinuxOS, Fedora, OpenSUSE, Manjaro နှင့်လက်ရှိ ArchLinux ။
သင့်မှာ Spyware မရှိသလောက်နည်းတယ်။
သိသာထင်ရှားတဲ့, developer များကထားခဲ့တယ်။
သူ၌ spyware မရှိပါ။ ဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်မှာ MSN phishing ၀ က်ဘ်ဆိုက်တစ်ခုသည် Tuquito ဆာဗာများပေါ်တွင်ပင်တည်ခင်းခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါကလွန်ခဲ့တဲ့5နှစ်ကဖြစ်ပျက်ခဲ့သည်။
ay ay ay ဟုတ်သည်မှန်လျှင် tuquito ၏မကောင်းသောစီမံချက်သည်မည်သည့်နေရာတွင်ကြည့်ပါစေတည်ငြိမ်သောတည်ငြိမ်သောဗားရှင်းမရှိခဲ့ပါ၊ ဒီဟာကိုရပ်လိုက်တယ် သူတို့ဟာသူတို့ကိုယ်သူတို့ပြသခဲ့ကြတာ၊ သူတို့မှာဆန္ဒမရှိဘူး၊ အချိန်မရှိဘူး၊ လေးစားမှုကင်းမဲ့တဲ့အသင်းမဟုတ်ပါဘူး။ သူတို့အားလုံးဟာစိတ်ဝင်စားဖို့နောက်ကွယ်မှာရှိတယ်။ tuquito ကိုကျောင်းများအတွင်းစည်းကြပ်ရန်ကြိုးစားခြင်းသည်ထိုစဉ်ကသာမန်အစိုးရနှင့်ဆက်ဆံခြင်းဖြစ်သည်။ ပိုပြီးစကားပြောဖို့ပေးပေမယ့်ငါကသာမန်လူတွေထက်ကျော်လွန်သွားပြီလို့ထင်တယ်၊ လူတိုင်းကငါတို့လိုဖြစ်မယ်ထင်တယ်၊ လေးနက်သောအဖွဲ့များနှင့်အတူလေးနက်သောစီမံကိန်းများကိုကျွန်ုပ်စိတ်ဝင်စားသည်။ Tuquito = Mediocity ။ ၎င်း၏ဖိုရမ်သည်ပါတီတစ်ခုဖြစ်ပြီးအတင်းအဖျင်းဖြစ်သည်။ ၎င်းသည်မည်သူမဆိုဖြစ်သည်။
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်၏လမ်းကြောင်းပေါ်တွင်မူတည်သည်။ ကျွန်ုပ်၏ sysadmin သည် add-ons သာဖြစ်သည်
ကိုယ်ရေးကိုယ်တာလမ်းကြောင်း - Slackware၊ Ubuntu (ကြာရှည်မခံသော)၊ Debian၊ ArchLinux
SysAdmin လမ်းကြောင်း: Debian, Centos, FreeBSD, Pfsense ,. CLonezilla LiveCd-> CLonezilla ဆာဗာ, SLED (Suse လုပ်ငန်း), သြစတြီးယား၊ Hiren Boot
Taster Path: Backtrack၊ Lunar Linux၊ Sabayon, Gentoo, Zenwalk, Elive, grml, DreamLinux, Puppy Linux, Tiny Core
ငါတို့ရှိသမျှသည်ငါတို့ကြိုးစားခဲ့ဘယ်နှစ်ယောက်၏စာရင်းချပြီးစတင်လျှင်, ငါတို့အာကာသထဲကနေပါလိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။ ခဏလေးကြာပြီးတဲ့နောက်ကျွန်တော်တို့စွန့်ပစ်လိုက်တဲ့ distros တွေကိုအာရုံစိုက်ပြီးသူတို့ဘာကြောင့်စွန့်ခွာသွားတာလဲ။
ကျွန်တော့်ဖြစ်ရပ်မှာ Sabayon တော်တော်များများသုံးခဲ့ပေမဲ့ဂရပ်ဖစ်ကားမောင်းသမားတွေနဲ့ပြproblemsနာတွေကြုံခဲ့ရတယ်။ Yast နဲ့ OpenSUSE ကိုသိလာတဲ့အခါငါမလှုပ်ရှားနိုင်တော့ဘူး။ 🙂
#Sabayon reached သို့ရောက်သည်အထိကျွန်ုပ်ပြေးခဲ့သည်
ဒါ့အပြင်ကျွန်တော်က xubuntu မှာမနေမချင်းသေးသေးလေးတစ်ဒါဇင်လောက်ပဲမှတ်မိသေးတယ်၊ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့နောက်ဆုံးမှာတော့ငါနဲ့ငါ့စက်ဟောင်းအတွက်အသင့်တော်ဆုံးပဲ။ ငါ2နှစ်ပြောင်းလဲသွားတယ်ကြပြီမဟုတ်
သူ့လက်ထက်၌ငါ Damn linux မှ reactos hahaha ... debian6ကို install လုပ်ရန်ကြိုးစားသော်လည်း၊ ကျွန်ုပ်သည်အလွန်စိတ်ရှုပ်ထွေးသောအရာတစ်ခုကိုမျှမပြုလုပ်နိုင်ပါ။ ကျွန်ုပ်အတွက် "ပြီးပြည့်စုံသော" ချိန်ခွင်လျှာမှာ xubuntu ဖြစ်သည်။
deb, deb, deb, deb ။
ငါ့စက်ပေါ်တွင် install လုပ်ထားသော PCLinuxOS, Ubuntu, Linux Mint Debian Edition, Sabayon, Debian, Calculate နှင့် Manjaro (ယခုငါသုံးနေတဲ့)
Fedora, Linux Mint နှင့်အခြား Virtual မဟုတ်သောစက်များတွင်စမ်းသပ်သည်။
virtual machine များ၌ (ဖော်ပြခဲ့သည့်အရာများကိုမရေတွက်ပါ) - Slackware, Backtrack, Netkit (ကွန်ရက်များအကြောင်းလေ့လာရန် knoppix)၊ Arch, Gentoo နှင့်မည်သည့်အရာများကိုကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။
albert ငါ ဟုသူကပြောသည်
knoppix, mandrake, suse, kubuntu, debian, arch, LFS, kaliu, damm သေးငယ်တဲ့ linux နှင့်ငါမမှတ်မိသောအခြားအရာများ။
ထိုအခါ Chakra နှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာ
albert I ကိုပြန်သွားပါ
နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်, Ubutu, Debian နှင့် Arch ,,,
၎င်းတို့ကိုငါ "နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်" အသုံးပြုသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ၎င်းတို့ကိုအနည်းဆုံးတစ်လမွမ်းမံရန်နှင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းရန်အတင်းအကျပ်ပြုလုပ်ရန်အထိဖြစ်သည်။ ငါ "live" style ကိုထည့်လိုက်တာနှစ်ခုလုံးကသူတို့ကိုအုပ်ချုပ်ရေးတာ ၀ န်တွေ၊ ပစ္စည်းကိရိယာတွေပြန်လည်ထူထောင်တာတွေအတွက်မကြာခဏသုံးလေ့ရှိတယ်။
1 ubuntu,2linux mint,3lmde,4archlinux,5debian,6centOS,7fedora, 8 crunchbang,9chakra, 10 opensuse, 11 slax, 12 partedmagic, 13 kubuntu, 14 xubuntu ။
ယခုတွင်ပိုကြိုးစားရန်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုးစားပြီးသော်လည်းမပြည့်စုံသေးသောအရာများ၊ သူတို့၏ CD များငါ့အတွက်လုံလောက်သောကြောင့်သို့မဟုတ်ငါမကြာမီဖြုတ်တပ်သောကြောင့်ဖြစ်သည်။
15 gentoo, 16 slackware, 17 LFS (distro? Haha), 18 manjaro, 19 trisquel, 20 clonezilla, 21 sabayon, 22 ပြန်လည်ထူထောင်ရေး disk ကို (gentoo), 23 ubuntustudio, 24 knoppix, 25 solusos ... နှင့်အချို့သောအခြားငါ အဆိုပါ inkwell အတွက်ကျန်ကြွင်းစေပြီ
ထိုအခါငါ Arch အပေါ်လက်ရှိဖြစ်၏ .. ငါ, ငါ့နီးပါးစံပြ distro .. Cheers .. found တွေ့ပြီထင်ပါတယ်
Debian amigo ကိုအခြေခံထားလျှင်တောင် LMDE သည် Mint ဖြစ်သည်
Debian, Ubuntu, Kubuntu, Solydk, ArchLinux, Fedora, Linux Mint, LMDE နှင့်ငါ RedHat ဆာဗာများကိုစီမံသည်။
Knoppix, Puppy, Ubuntu နှင့် Family, Mint, OpenSuse, DEBIAN
ငါ Kubuntu နဲ့စတင်ခဲ့ပြီး၊ distros အမြောက်အများကိုအဓိကစနစ် (အောက်တွင်ဖော်ပြထားသည်) အဖြစ်ကြိုးစားပြီးနောက်လအနည်းငယ်အကြာတွင်၎င်းကိုပြန်လည်အသုံးပြုခဲ့သည်။ စုစုပေါင်းငါ Kubuntu နှင့်အတူသုံးနှစ်ကျော်သို့မဟုတ်ထိုထက်ပိုခဲ့ကြထင်ပါတယ်။
ငါသုံးခဲ့တဲ့တခြား distros များ - Xubuntu (ငါတကယ်သုံးတယ်၊ နှစ်အတော်ကြာတဲ့ netbook ပေါ်မှာနှစ်ပေါင်းများစွာကျွန်တော်ကိုယ်တိုင်အများကြီးမသုံးခဲ့ဘူး)၊ OpenSuse, Chakra နှင့် Ubuntu (Cinnamon နှင့်အတူသော်လည်း)
VirtualBox တွင်ကျွန်ုပ်ကြိုးစားခဲ့သော distros များကိုရေတွက်လျှင်၎င်းစာရင်းသည်ပိုမိုကြာရှည်လာလိမ့်မည်။ Linux Mint, LMDE, SolydK, Manjaro, Fedora, Mageia, Lubuntu, Sabayon, Netrunner နှင့်အခြားအရာများ။
Live mode မှာသုံးခဲ့တဲ့ Backtrack, Knoppix နဲ့ Rescatux တို့ကိုငါအမှတ်ရတယ်။
ကောင်းပြီ, ဒါကြောင့်များစွာသောမဖြစ်ခဲ့ပါ။ ငါ့အကြိုက်ဆုံးနှင့်အချိန်ကြာမြင့်စွာငါ့ကွန်ပြူတာများထဲမှတစ်ခုတည်းသော ArchLinux ။ ငါသည်လည်း Ubuntu နဲ့စတယ်။ Debian, OpenSuse, Fedora, LinuxMint ကိုသုံးတယ်။ ခဏခဏငါ PuppyLinux နှင့် Slackware-based ကိုသုံးပြီး၎င်း၏အမည်ကိုမမှတ်မိပါ။
ငါ Lubuntu, Fedora, Pear OS, Opensuse နှင့်လက်ရှိ (နှင့်ငါမစွန့်ခွာချင်သော) Debian Wheezy ကိုသုံးခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ်သည်အခြားအရသာများကိုစမ်းသပ်ရန်စီစဉ်သော်လည်း၊ ငါ Debian ကိုစိတ်ကျေနပ်မှုအပြည့်ရှိသောကြောင့် virtual machine ဖြစ်သောဤ distro သည်ကျွန်ုပ်၏အကြိုက်များနှင့်ကိုက်ညီသည်။ ယခင်အရာများနှင့်ကျွန်ုပ်ပြောင်းလဲရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သောကိုယ်ရေးကိုယ်တာအရသာအချို့ရှိသည်။ ရွှင်လန်း!
uyyy ငါကြိုးစားခဲ့သော distros အားလုံးကို debian, arch, gentoo စသည်တို့စသည်ဖြင့်မသိတော့ပါ။ အမှန်တရားမှာ၎င်းတို့တွင်အချို့သောအားသာချက်များရှိသည်၊ အထူးသဖြင့်ပုံမှန် application များ၌အထူးသဖြင့် default applications များဖြစ်သည်။ default အနေဖြင့် samba၊ ၎င်းကို repositories မှဒေါင်းလုပ်လုပ်ရန်လိုသည်။ configure လုပ်သောအခါအသေးစိတ်အချက်အလက်များအမြဲတမ်းရှိနေသည်။ smb.conf ကိုအပူနှင့် configure လုပ်ရန်လိုအပ်သည်။ uffff သည် graphical application မရှိသောကြောင့် သင်လုပ်နိုင်သည်ကိုပြတင်းပေါက်များကဲ့သို့ရိုးရှင်းသောနည်းဖြင့် LAN ပြုလုပ်ရန်သို့မဟုတ်ဖိုလ်ဒါများကိုမျှဝေရန်ခွင့်ပြုသည် (မျက်စိ။ ၎င်းသည်ပိုကောင်းသည်ဟုမပြောချင်ပါ။ ) သို့သော်သုံးစွဲသူများအတွက်ငြီးငွေ့ဖွယ်ဖြစ်ပြီး၊ distro သည် configuration ကိုအသုံးပြုနိုင်ရန်ကိရိယာများကိုပေးသင့်သည် ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်လမ်းလွှဲ (သို့) အဖြစ်အပျက်များများများစားစားမရှိဘဲ (ဒီဟာကကွန်ပျူတာအကြီးအကဲများနှင့်ပရိုဂရမ်မာများဖြစ်သည်) ဘာပဲဖြစ်ဖြစ် linux အမြောက်အများနဲ့ရုန်းကန်ခဲ့ရပြီးတဲ့နောက်ငါဟာပိုပြီးတိကျတဲ့ Point Linux (MATE) ဖြစ်ဖို့အတွက် Debian မှာရပ်တန့်သွားခဲ့တယ်။ ကျွန်တော့်ကို UBUNTU နှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျအကြောင်းမပြောပါနဲ့။ Manjaro (ARCH) ကိုကြိုက်ပါတယ်။ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုဆန့်ကျင်သောအရာအချို့ကိုတွေ့မြင်ခဲ့ပြီး gentoo နှင့်အခြားသူများကကျွန်ုပ်ကိုဘယ်တော့မှမယုံကြည်ခဲ့ကြပါ။
mmm ... opensuse, mandriva, ubuntu, fedora, linux mint, debian, lubuntu, xubuntu, မူလတန်း OS ။ ကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်
ကျွန်ုပ်သည်မှတ်စုစာအုပ်၊ desktop နှင့် lubuntu ပေါ်တွင်အခြေခံအားဖြင့် netbook တွင်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသည်
ကျွန်တော့်ရဲ့ပထမ ဦး ဆုံး GNU / Linux distro ကိုကျွန်တော် ၂၀၀၈ ခုနှစ်တွင် install လုပ်ခဲ့ပြီး၎င်းသည် Linux Mint Elyssa ဖြစ်ပါသည်။ ကျွန်ုပ်သည် Linux Mint မှလွဲ၍ မည်သည့်အရာကိုမျှအသုံးမပြုပါ။
ထိုအခါငါငါအများကြီး many အသုံးပြုခဲ့သည်ထင်ခဲ့တယ်
၁) Mandrake Linux
၄) Ubuntu (Kubuntu, Lubuntu, Xubuntu)
၆) Linux Mint
၇) Puppy Linux
ငါလက်ရှိ Linux Mint, Ubuntu, Trisquel နှင့် OpenSuse ကိုအသုံးပြုသည်။ သို့သော်၎င်းသည်အခြားသူများကိုတပ်ဆင်ရန်အချိန်ဖြစ်သည်။ ငါရွေးချယ်နိုင်ရင်ရေခဲမုန့်အရသာတူတယ် (အားလုံးနီးပါးနီးပါး) ။
ငါ Kubuntu ၌ပထမဆုံးခြေလှမ်းကိုလှမ်းလိုက်ပြီး "kubuntu-es" အသိုင်းအ ၀ ိုင်းမှများစွာသင်ယူခဲ့သည်။ တစ်နှစ်အကြာတွင် Chakra စီမံကိန်းသို့သွားပြီး၊ ကျွန်ုပ်၏ဤ "distro home" ကိုတစ်နှစ်ကျော်လေ့လာခဲ့သည်။ ငါအမြဲတမ်း Debian stable ကိုသုံးသော home servers များကိုစမ်းသပ်ရန်နှင့်အစပျိုးရန်လေးစားပါ။
Ubuntu, Fedora, Mint, Debian, LMDE, Sabayon, Mageia, openSUSE, CrunchBang, PCLinuxOS, Xubuntu, Chakra, PC-BSD, ArchBang, gNewSense, Manjaro, Arch ။
သူတို့ကအဆင်မပြေဘူး၊ တချို့ကမိနစ်တွေ၊ တချို့ကနာရီပဲ၊ လတွေရှိတယ်။
ငါ linux mint, debian, elementary os, archlinux, fedora, kubuntu, lubuntu နဲ့ငါ့ရဲ့လက်ရှိ distro manjaro linux ကိုသုံးပြီး
၂: ဖီဒိုရာ (gnome)
၃။ OpenSuse (gnome, kde, xfce, lxde နှင့် enligthment)
၄။ Linux mint (xfce, kde, cinamon, mate နှင့် debian-based version)
၈: ပုိုင် ၈:
10: ခွေးကလေး linux
၁၁: Debian 11 (kde, gnome နှင့် xfce)
ထိုအခါငါ xfce နှင့်အတူ OpenSuse 13.1 ရှိသည်
ငါ Ubuntu နဲ့စခဲ့ပေမယ့်ငါလုံးဝမကြိုက်ဘူး။ ငါသူတို့ရဲ့ KDE မူကွဲ Kubuntu ကိုကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကသိပ်ပြီးမယုံနိုင်လောက်အောင် Debian ဆင်းသက်လာတဲ့ဖြန့်ဖြူးမှုအကြောင်းတစ်ခုခုရှိတယ်။ သူတို့မှာကြီးမားတဲ့အသိုင်းအ ၀ ိုင်းရှိတယ်၊
ငါထို့နောက် RPM ဘက်သို့သွားကြ၏။ ငါ Mandriva နဲ့အတူစတင်ခဲ့ပြီးသူတို့နဲ့အချိန်အကြာကြီးနေခဲ့ရတယ်၊ ဒါပေမယ့် Mageia ရဲ့ပုံပန်းသဏ္causedာန်ကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာတဲ့ပြproblemsနာတွေစတင်ခဲ့ပြီးငါဟာအကြပ်အတည်းကြုံခဲ့ရတယ်။ Mageia ဟာတည်ငြိမ်မှုရှိမလားဆိုတာကျွန်တော်မသိခဲ့ဘူး၊ ဒါကြောင့်ငါ Fedora ကိုခဏပြောင်းလိုက်တယ်။
ဒါပေမဲ့ဖီဒိုရာကကျွန်မကိုတိုက်ရိုက်ထိခိုက်စေတဲ့ဆုတ်ယုတ်မှုရှိခဲ့တယ်။ OpenSuse ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ကောင်းပါတယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီး ArchLinux ကစာနယ်ဇင်းတွေအများကြီးရခဲ့တယ်။ ArchLinux ကိုတစ်ကြိမ်မှမတပ်ဆင်ခဲ့သော်လည်းသင်ကိုယ်တိုင် install လုပ်သော Linux စနစ်အတွက်၎င်းသည်အတော်လေးအဆင်မပြေဖြစ်ခဲ့ရသည်။
ArchLinux ကိုဒုတိယအခွင့်အရေးပေးဖို့ Chakra ကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့် GTK Bundle system ဟာအနာဂတ်မှာဘယ်လိုကိုင်တွယ်မလဲဆိုတာမသေချာဘူး။ ရွေးချယ်စရာအသစ်တစ်ခုကိုရှာဖွေနေသည် လှိမ့်ဖြန့်ချိ, တည်ငြိမ်ပြီးအဆက်မပြတ်မွမ်းမံ, ငါယခုငါအသုံးပြုသောတ Sabayon တွေ့ရှိခဲ့ပါတယ်။
သို့သော် Sabayon သည် "မိခင်" ၏အဓိကအားသာချက်ဖြစ်သောအသုံးချခြင်းကိုအသုံးမပြုခဲ့သောလွယ်ကူချောမွေ့သော Gentoo ဗားရှင်းဖြစ်သည်။ အလံ software configuration - Gentoo ဖိုရမ်များ၌ Sabayon သည်အလွန်ဝေဖန်ခံရသည်ကိုမပြောပါနှင့်။ ငါပတ်ပတ်လည် nosing ခဲ့ကြခြင်းနှင့်အသုံးပြုမှု၏အားသာချက်ယူပုံရသည်အလားတူဖြန့်ဖြူးရှိပါတယ် အလံတွက်ချက်သည်။ တွက်ချက်တာကရုရှားပဲ။ ဒါကငါ့ကိုပိုပြီးတည်ငြိမ်မှုအာမခံချက်ပေးတယ်။ Sabayon တစ်နေ့ငါ့အားစည်းရုံးခြင်းများရပ်တန့်သွားပါကကျွန်ုပ်၏အနာဂတ်သည် Calculate or Gentoo အကြားရှိလိမ့်မည်ကိုကြိုတင်ခန့်မှန်းခဲ့သည်။
Desktop ပေါ်မှာအမြဲတမ်း DEB ကိုအမြဲတမ်းတွယ်ကပ်ခဲ့တယ်။ ငါတော်တော်များများ * ubuntu ကိုသူတို့ရဲ့အရသာအမျိုးမျိုးနဲ့ကြိုးစားပြီး debian ကိုသုံးဖို့ကြိုးစားခဲ့တယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါက AMD hardware ကိုသိပ်မကြိုက်ဘူး။ ငါ့မှာ intel / nvidia pc အရင်ရှိခဲ့ရင်မတည်ငြိမ်မှုမှာတောင်မှအဲဒါကိုကျွန်တော်အများကြီးသုံးခဲ့တယ်၊ ပြproblemနာမရှိဘူး။ ကျွန်ုပ်၏ဆာဗာများ (သို့) အခြားသူများစွာတွင်အရာများပြောင်းလဲသွားသည်။ ငါ debian, gentoo ကိုသုံးတယ်၊ ငါ Arch (အသုံးပြုတဲ့အချိန်မှာ) ကိုသုံးတဲ့အချိန်တောင်မှရှိတယ်။ ပြီးတော့ live CD များမှ SystemRescueCD ကိုကျွန်တော်အမြဲတမ်းသုံးတယ်
ummmm ... ငါမှတ်မိမယ်ဆိုရင်၊ ငါပထမဆုံး distro ကိုသုံးတဲ့အချိန်ကငါဟာမူလတန်းကျောင်းမှာရှိတုန်းကသူတို့ကကျောင်းကွန်ပျူတာတချို့ကိုသုံးတယ်၊ windows 95 နဲ့ double boot တို့ဖြစ်တဲ့ boot နှစ်ခုမှာ red hat linux သို့မဟုတ် debian ရှိခဲ့ပေမဲ့၊ ကျွန်ုပ်ပထမဆုံးစဉ်းစားခဲ့သည့် Red Hat Linux သည်အမှန်တရားပင်ဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်အထက်တန်းကျောင်းတွင် Windows XP (SP မပါဘဲ) Windows XP နှင့်အတူပါလာသည့်ပထမ ဦး ဆုံးသော PC ကိုအသုံးပြုပြီးနောက်တွင်၎င်းကိုကျွန်ုပ်အလွန်နှစ်သက်သည်။ PC အလွန်နှေးကွေးလာပြီးကျွန်တော် Ubuntu 98 ကိုတင်လိုက်သည်၊ ထိုအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်အလွန်ကြိုက်ခဲ့သည်၊ ၎င်းကို သုံး၍ ဆက်လက်အသုံးပြုခဲ့သည်။ Ubuntu ငါကြိုးစားပြီးသည်နောက်၊ fedora, mandriva, opensuse, (အကယ်၍ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်ပါက) rpm distro) ပြီးတော့နောက်ပိုင်းမှာ hehehehe ... crunchbang, etc စသဖြင့်ရှိသင့်သည်
ကောင်းပြီ, ဒီသို့မဟုတ်ဒီပို။ ဒီထက်။ (ငါအလေးအနက်ကြိုးစားခဲ့သောသူများကိုသာငါထားသွားမှာပါ)
-Aurox ။ ငါပထမ ဦး ဆုံးပြေးခဲ့တဲ့ Linux ကိုငါ install လုပ်လို့မရဘူး၊ ဒါပေမယ့်အဲ့တာက live လောက်ပဲအလုပ်လုပ်တယ်၊ ဒါပေမယ့်အဲဒါကိုပထမဆုံးထားလိုက်တယ်။ ဒီဖြန့်ဝေသေဆုံးသွားခဲ့သည်
-Knoppix ၅.၁ ။ ငါ install လုပ်ပထမ ဦး ဆုံးအရာ သူက software တော်တော်များများ၊ KDE 5.1 ကောင်းတယ်၊ အဲဒါကိုစပိန်ဘာသာနဲ့ပြန်ဆိုလိုက်တယ်၊ ဘယ်လောက်မြန်မြန်ပြေးလာလဲဆိုတာကိုကျွန်တော်တကယ်အံ့သြသွားတယ်။
-Fox Desktop ။ ဒီဖြန့်ဖြူးမှုက Aurox နှင့်အတူမဂ္ဂဇင်းအတူတူပင်ထုတ်ဝေခဲ့သော်လည်း Knoppix ပြီးနောက်ငါ install လုပ်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် KDE အပြင်အဆင်ပါသည့် Fedora Core4ဖြစ်သည်။ ငါ layout ကိုဖယ်ရှားခြင်းနှင့် windowsero စတိုင်၌ထားခဲ့ပေမယ့်: P. သေဆုံးသောနောက်ထပ်ဖြန့်ဖြူး
-Fedora Core ၆။ Compiz နဲ့ပထမဆုံးဖြန့်ချိတာလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်။ နံရံကပ်စက္ကူအပိုင်းအစတစ်ခု၊ Fedora ရဲ့ယောက်ျားတွေကဒီ version ဒါမှမဟုတ် Fedora 6. လိုအနုပညာလက်ရာများကောင်းကောင်းလုပ်နိုင်မလားကြည့်ရအောင် Fedora 7s ဟာမကောင်းဘူးမဟုတ်လား။ ၎င်းသည်အချိန်ကြာမြင့်စွာတပ်ဆင်ရန်ပထမဆုံးဖြန့်ချိခြင်းဖြစ်သည်။
-Mandriva ။ ကောင်းပြီ၊ ငါဒီဖြန့်ဖြူးမှုကပရိုဂရမ်တွေကိုတကယ် install လုပ်ဖို့ပထမဆုံးသင်ယူခဲ့တဲ့ပထမဆုံးလို့ထင်တယ်။ ကိုယ့်ဘာသာကိုယ့်ဘာသာ Linux ကိုလောကထဲဝင်လာတယ်။
-Fedora ၈ ။ Fedora နှင့်အတူပြန်သွား။ ဒီဗားရှင်းတွင် Plymouth theme (သို့မဟုတ်ထို့နောက်မည်သည့်အရာများပါရှိသေးသည်) နည်းနည်းရှိသလဲ။ ယခုမူဗားရှင်းများသည်အလွန်ရိုးရှင်းပါသည်။
-Elive ကျောက်မျက်ရတနာ ယခုငါဒီဖြန့်ဖြူးခြင်း၏အလှည့်ဖြစ်ပါတယ်ထင်ပါတယ်။ ကြီးမားသောသစ္စာဉာဏ်အလင်းစားပွဲ။ ငါဒီဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူကြာမြင့်စွာနေခဲ့ရသည်။
-Debian Etch ငါ Elive repositories ထဲမှာထည့်ခဲ့ဖူးတယ်၊ ဒါပေမယ့်ငါကအခြား desktop environment တွေနဲ့လည်းသုံးဖူးတယ်။
-X-vian ငါကဒါခေါ်ခဲ့သည်ထင်ပါတယ်။ Xfce နှင့်အတူရှားပါး Debian-based distro
-Elive ကျောက်မျက်ရတနာ ငါဖြန့်ဖြူးနှင့်အတူပြန်လာ။ နောက်ပိုင်းမှာထင်ပါတယ်။
-Archie Arch ကိုထည့်သွင်းအသုံးပြုခဲ့သည့်ဖြန့်ဖြူးခြင်း။ Xfce တွင်ကောင်းမွန်သည်။ ငါ Enlightenment ထားတယ်။ ကျွန်ုပ်တွင်ဗီဒီယိုဖွင့်စက်နှင့်ပြproblemsနာအချို့ရှိပြီးယေဘုယျအားဖြင့် Arch နှင့်အတူသင်ဖြန့်ဖြူးခြင်း၏ကျွန်ဖြစ်လာသည်ဟုထင်ရသည်။
-Fedora ။ နောက်ကျော Fedora နှင့်အတူ။ ငါကဗားရှင်း 12 နဲ့ 13 ဖြစ်လိမ့်မယ်ထင်ပါတယ်။
-Sidux ယခု aptosid ဟုခေါ်သည်။ ကောင်းသော Debian Sid ။
ကောင်းပြီငါသူတို့ကိုစာရင်းပြုစုရန်အလွန်များပြားလိမ့်မည်ဟုအငြင်းပွားဖွယ်ရာအချို့ကိုလည်းသုံးပြီးအချို့ကိုငါသတိမရမိသောကြောင့် knoppix, mandriva, opensuse, .deb family, Fedora နှင့်။ Mas , ယခုငါဂီတဘာသာရပ် Linux ကိုရောက်နေပြီ။ Fedora 20 နှင့် mint 16 ကိုငါ Manjaro မှအပအခြားမည်သူနှင့်တွေ့မည်ကိုစောင့်ကြည့်ရန်ထွက်လာသည်ကိုစောင့်နေသည်။
Trixi ၃ ဟုသူကပြောသည်
အမှန်တော့ကျွန်တော်ရေဆုံးရှုံးသွားတယ်၊ ကျွန်ုပ်သည် Linux လောကတွင် ၇ နှစ်ကြာခဲ့ပြီးပါပြီ။ Ubuntu နှင့်စတင်ခဲ့ဖူးသမျှကျွန်ုပ်မသိပါ၊ ထိုအရပ်မှကျွန်ုပ်မမှတ်မိပါ။ fedora, debian, arch, archbang, mageia , တံတား, gentoo, ပူစီနံ, lmde, မူလတန်း, fuduntu, crunchbang, gnewsense, opensuse နှင့် susestudio, ခွေးကလေးနှင့်အနကျအဓိပ်ပါယျ, etc ။
1Mandriva (ဂရပ်ဖစ်ပတ် ၀ န်းကျင်နှင့် ပတ်သတ်၍ စိတ်ကူးစိတ်သန်းမရှိဘဲ kde4 ကိုထည့်ပါ၊ သို့မဟုတ် ၅၁၂ megabytes ram ရှိသည့်ကွန်ပျူတာထဲတွင်ကျွန်ုပ် cpu ကိုကျွန်တော်မမှတ်မိပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုစွန့်ပစ်ခြင်းမရှိလျှင်ယခု ၁၃ နှစ်အရွယ်၌ရှိပါမည်။ ) \_ t ဒါပေမယ့်သိပ်မနှေးဘူး၊ xp xD ထက်ပိုကောင်းတယ်)
2Ubuntu 8.10 ကျောင်းတွင်
3Ubuntu 10.04 သည်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ကွန်ပျူတာ၌ရှိပြီးကွန်ပျူတာသိပ္ပံနှင့်ပတ်သက်သောဗဟုသုတများစွာရှိပြီးမိသားစုအားလုံးကိုစမ်းသပ်ပါ
10Debian ဒီမှာငါ့နေရာကိုတွေ့ပြီ =)
၎င်းသည်တစ်နှစ်အတွက်အလွန်များပြားသောဖြန့်ဝေမှုများဖြစ်သည်! ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည် Ubuntu, Xubuntu နှင့် Fedora တို့ကိုကောင်းစွာအသုံးပြုခဲ့သည်။
ဘလော့ဂ်သူငယ်ချင်းကိုကျေနပ်နှစ်သက်စေပြီးကျွန်ုပ်သည် GNU / Linux distros များကိုကြိုးစားခြင်းကိုနှစ်သက်သည်။ အခြားသူများအနက် Linux mInt, mageia, fedora, opensuse, debian, deep-linux, kubuntu, PCLinux နောက်ဆုံးတွင်ငါမူရင်းဂျပန်ဇာတိဖြစ်သော VAIO laptop တွင် ubuntu 13.10 ကိုစမ်းသပ်နေပြီး၎င်းအတွက်ငါမောင်းနှင်ရန်မတတ်နိုင်ပါ။ မည်သည့် Windows ကိုမဆို အမှန်တရားကဒီ distros အများစုဟာကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ကြပြီး hardware ကိုမှတ်မိကြတာပါ။ ဒီဝါသနာကိုငါအရမ်းသဘောကျတယ်။
Eljorge ၂၁ ဟုသူကပြောသည်
ကျွန်ုပ်၏ pc တွင် install လုပ်ခဲ့သောပထမဆုံး distro သည် Mandrake7ဖြစ်ပြီး၊ ututo linux၊ Lindows, mandriva, red hat နှင့်နှစ်များစွာကြာခဲ့သည်။ ကျွန်ုပ် Linux ပြန်လာရန်နှစ်အတန်ကြာ Mint၊ ထို့နောက် Ubuntu, archbang, fedora နှင့် လက်ရှိမူလတန်း os (သိသာတဲ့ခွေးကလေး, elive, bodhi, အလယ်တန်းဖြတ်သန်းလွန်း)
ငါအောက်ပါဖြန့်ဝေမှုများကိုအသုံးပြုသည်သို့မဟုတ်ကြိုးစားခဲ့သည် - Ubuntu, Linux Mint, kubuntu, Pear OS, Asturix, Easypeasy, backtrack, debian, fedora, trisquel, Darwin OS, Elementary OS, နှင့် CrunchBang - ငါ Ubuntu ငါပြုပြင်ပြီးပြီ ၁၂.၀၄ နဲ့ကျွန်တော်ဒုတိယအကြိုက်ဆုံးကတော့ ၂၀၁၄ ခုနှစ်12.04ပြီလကိုစောင့်နေတဲ့ Linux Mint ပါ
အသက်ကြီးသူတွေအတွက်တော့ Conectiva နဲ့ငါစတင်ခဲ့ပြီး Mandrake ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။
Ubuntu ပထမ ဦး ဆုံး KDE ကိုပိုကြိုက်လို့ KUbuntu ကိုသွားခဲ့တယ်။ ယခုတွင်ငါသည် Arch + KDE တွင်ရှိနေပြီး၊ ကျွန်ုပ်ဤတွင်အချိန်ကြာမြင့်စွာနေမည်။
ကောင်းပြီ၊ လွန်ခဲ့သော ၁၂ နှစ်ကကျွန်ုပ်သည် Fedora ကိုစတင်စမ်းသပ်ခဲ့ပြီးကျွန်ုပ်၏ခုန်ပျံကျော်လွှားခြင်းကြောင့် Ubuntu, ChakraLinux, Kubuntu, LinuxMint, Sabayon, OpenSuse (xD) တွင် OpenSuse (ယခု x Man) ကိုသုံးရန်ကြိုးစားခဲ့သည်။
ငါ Windows ကိုစိတ်အနှောင့်အယှက်ဖြစ်စေခဲ့တယ်။ မိုက်ခရိုဆော့ဖ်ကသင့်ကိုသူတို့ပြောတာတွေကိုသုံးဖို့ဖိအားပေးပြီးသူတို့ပေးသမျှကိုထိပ်ဆုံးကနေရယူဖို့ X ကိုတိုက်တွန်းလိုက်သည်။
၁ ။ Knoppix
5 ။ Ubuntu ကို
၆။ Linux Linux
Arch Linux ... ပြီးတော့ငါလုံးဝပျောက်ကင်းသွားခဲ့တယ်၊ လေးနှစ်သစ္စာရှိခဲ့တယ်
များစွာသောသူတို့သည်ဖြစ်ပျက်ပုံရသည် - Archlinux ကိုသင်ရှာဖွေတွေ့ရှိသောအခါသင့်ကိုအခြားမည်သည့်အရာကမှမယုံကြည်စေပါ၊ ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင်လည်း Arch ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်မပြောင်းလိုပါ
Jonathan Delgado ဟုသူကပြောသည်
ငါဟာသူ့ရဲ့အခြေခံပတ်ဝန်းကျင်နဲ့လွယ်ကူမှုအတွက် elementari OS ကိုသုံးတယ်။ ဒါပေမယ့်ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ဒီနေ့နှင့်အသုံးပြုသည်။
Jonathan Delgado သို့ပြန်သွားပါ
Hehe ငါဒါကြိုက်တယ် ကြည့်ကြရအောင်:
ငါ BLFS လုပ်နေတယ်၊ ​​အဲဒါရေတွက်မလားမသိဘူး။ မင်္ဂလာပါ😀
ဝမ်းနည်းဖွယ်အဝိဇ္ဇာ၊ ဒါပေမယ့် BLFS ဆိုတာဘာလဲ။
ငါကြိုးစားခဲ့သူများမှာ - mandrake, opensuse, fedora, archlinux, debian, ubuntu, linuxmint, lmde, xubuntu, Kaos, chakra, sabayon, centos ။ သူတို့အားငါ့အကြိုက်ဆုံး Arch pacman ၏ဖန်တီးသူများအတွက်နိုဘယ် !! ahahah နှုတ်ခွန်းဆက်ပါတယ်
Pacman ကိုဘုရားသခင်ကောင်းချီးပေးပါစေ !!!!
ကောင်းပြီ၊ ubuntu, linux mint, piros os, elementos os, debian, opensuse, fedora, chakra,
mageia, နှင်းဆီ, crunchbang, pinguy linux, zorin, xubuntu, solyd k, netrunner နှင့်ငါတည်းခိုသည့် kubuntu ကိုမေ့သွားသည်ဟုမထင်ပါ။
မင်္ဂလာပါ Od_air စာဖတ်သူကိုသင်ကြိုဆိုပါသလား ကြိုဆိုပါတယ်။
ခင်ဗျားရဲ့မေးခွန်းနဲ့ပတ်သက်ပြီးကျွန်တော်ဖြန့်ချိမှုအတော်များများကိုသုံးခဲ့တယ်၊ ခင်ဗျားလောက်မများခဲ့ဘူး၊ ငါ ၄ နှစ်ကျော်ပြီ။
Jorge ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်။
ငါ Ubuntu 10.04 နဲ့စခဲ့တာပါ။ ဒီအတွက်ကြောင့် Linux ကိုလေ့လာခဲ့လို့အဲ့ဒီကနေအများကြီးသုံးခဲ့ပြီးပါပြီ။ မှတ်မိရင် Ubuntu (kubuntu, xubuntu, lubuntu), Mint (သစ်ကြံပိုး၊ xfce, kde), mandriva, opensuse, crunchbang, puppylinux (သတိထား၊ slacko၊ တိကျ၊ macpup၊ puppy is), slitaz, molinux, bodhi, elive, mageia, elementary, fedora, manjaro, chakra, slax, ငါသူတို့ကိုလက်ရှိကွဲပြားခြားနားသောကွန်ပျူတာများပေါ်တွင်တပ်ဆင်ပြီးသောနောက်ဆုံး5။ ပြီးတော့တစ်ချိန်ချိန်မှာ Arch (ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး XP ကွန်ပျူတာ၌ကျွန်ုပ်ရှိသည်) !! နှင့်အစဉ်မပြတ်ငါပြန်လာခဲ့သည်။ Manjaro တောင်မှငါ့ကိုငါ့ထံမှဝေးကွာသွားအောင်မလုပ်နိုင်ခဲ့ဘူး။ ဒီအခိုက်မှာငါ fedora XD မှာအလုပ်လုပ်နေတယ်
ဤရွေ့ကားငါအနည်းဆုံး5လကြာအောင်သုံးခဲ့ကြသူများဖြစ်ကြ၏, သိသာတဲ့ငါအများကြီးပိုများနှင့် XD ဗားရှင်းကြိုးစားခဲ့ !! သူတို့ဘယ်လိုဖွံ့ဖြိုးတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့အမြဲ
၁။ Mandrake ၉
2.- Debian Lenny (ယခု Debian Wheezy) ။
၃။ Ubuntu Oneric
၅။ Slackware ၁၄
6. Linux Arch ။
7.- RIP Linux ကို။
အပြင် Ubuntu မှ… .many အမည်: Mint, OpenSuse, Fedora, Mandriva.Zorin (ငါအနည်းဆုံးကြိုက်နှစ်သက်သော), Kubuntu, Sabayon (ငါအရမ်းကြိုက်တယ်) နှင့်အခြားများစွာရှိသည်။ သို့သော် ... ငါအမြဲတမ်းငါကြိုက်နှစ်သက်ရာသို့ပြန်သွားပြီး bores me: UBUNTU …သူတို့ပြောတာကိုငါဂရုမစိုက်ဘူးဗားရှင်း ၁၃.၀၄ နဲ့ ၁၃.၁၀ ဟာတည်ငြိမ်မှု၊ မြန်နှုန်းနဲ့ကုန်ထုတ်စွမ်းအားတွေအတွက်အံ့သြစရာကောင်းတယ်။
စည်းလုံးညီညွတ်ရေးလည်းအံ့သြဖွယ်ကောင်းလောက်အောင် ... ပြောင်းလဲနေသည်။ XMir ဘာတွေဖြစ်နေသလဲဆိုတာကြည့်ရအောင်။
ဒါဟာsurelyကန်အမှန်ကြီးစွာသောအောင်မြင်မှုဖြစ်လိမ့်မည် ... ။
ကောင်းပြီ၊ ငါ Ubuntu နဲ့စပြီးတော့ Xubuntu ကိုပြောင်းလိုက်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့အဲဒါပေါ့ပါးလို့ပေါ့။ လောလောဆယ်ငါ Debian + Xfce ကိုသုံးသည်။ လွန်ခဲ့သောရက်အနည်းငယ်က Manjaro ကိုစမ်းသပ်ချင်သော်လည်းသူကငါ့ကိုထိတ်လန့်တုန်လှုပ်စရာဖြစ်စေသည်။ ထို့ကြောင့်ငါ OpenSUSE ကို Gnome3နှင့်စမ်းသပ်နေသည်။ Gnome ၏ဤဗားရှင်း) ။
ဒါပေမယ့်ငါကတခြားသူတွေကို Virtual Machine တွေမှာနည်းနည်းလောက်စမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။ Fedora, Elive (ကြည့်ဖို့သပ်သပ်ရပ်ရပ်)၊ Hybride Fusion (တစ်ချိန်တည်းမှာပတ် ၀ န်းကျင်မျိုးစုံစမ်းသပ်ခြင်းအတွက်အရမ်းတော်တယ်) Huayra ။
ငါ Ubuntu 8.04 ဖြင့် Linux သို့ပြောင်းရွေ့ခဲ့သည်။ ထိုအရပ်မှကျွန်ုပ်သည် Fehora, Opensuse, Tuquito, Asturix (ဤနှစ်ခုလုံးကိုလျစ်လျူရှုထားသည်) Kubuntu, Xubuntu, Mint, Mageia, Moblin-Meego (ကောင်းမွန်သော interface တစ်ခု ကျေးဇူးပြု၍) Bodhi Linux၊ PCLinuxOS, Antergos ... haha ​​Linux သည်ရေခဲမုန့်ကဲ့သို့ပင်ရာပေါင်းများစွာအရသာရှိသောအရသာနှင့်တူပြီးအများစုမှာကြွယ်ဝသည်။ ဖက်သည်
တစ်နှစ်မပြည့်ခင်သင်သိသော Distros ပမာဏကိုကျွန်တော်အံ့အားသင့်မိပါတယ်၊ အမှန်တရားကသိပ်ပြီးမရဲရင့်ပါ၊ ဒါတွေဟာကျွန်ုပ်တို့ထက်ငါးနှစ်အတွင်းအနည်းငယ်သိခွင့်ရခဲ့တဲ့ Distros တွေပါ။ ကျွန်ုပ်သည်ဤ OS ကိုခံစားနေရသည် (ကျွန်ုပ်သည်လက်ရှိတွင် Linux Mint ကိုအသုံးပြုနေသည်)
BackTrack, Knoppix၊ Parted Magic၊ CloneZilla, DRBL
Mandrake, Mandriva, OpenMandriva, Rosa Fresh Edition, Mageia (KDE နှင့်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး) Redhat, Fedora, PClinuxOs, Debian, Ubuntu, Xubuntu, Lubuntu, Kubuntu, Netruner, Linux Mint (အားလုံး)၊ SolusOS, Elementary, opensuse, Cinarch (ယနေ့) Antergos), Manjaro, Canaima, Chakra, Kaos
ubuntu ကိုစသုံးသည်။ ၎င်း၏ cubic effect ကြောင့် ၂၀၁၀ နှင့်အောက်တွင်များစွာဆွဲဆောင်နိုင်ခဲ့သည်။ gnome 2010 shell သည်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံးဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့် Debian3ကိုတည်ငြိမ်မှုအတွက်စောင့်ပါ၊ သင်၌ဗားရှင်း (၁၁.၀၄ စက္ကန့်) တွင်ညီညွတ်မှုနှင့်အတူသင်လိုချင်သည်။ ငါအသက်ရှင်နေထိုင်သည်ကိုတွေ့မြင်လိုသည်မှာ (အောက်ပါအစီအစဉ်အတိုင်း - kubuntu, edubuntu, xubuntu နှင့် lubuntu သည်၎င်း၏အလင်းရောင်ကြောင့်ငါ့ကိုသတ်ပစ်ခြင်း) လက်ရှိတွင် debian တည်ငြိမ်သော7ဖြင့်ငါနှင့်အစတွင် gnome 11.04 shell သို့မဟုတ် lxde အကြားရွေးချယ်ပြီးကျွန်ုပ်ပျော်ရွှင်သည်။
ငါ့ရဲ့ပထမဆုံး distro, redhat, ပြီးတော့ ubuntu (kde, xfce, lxde), bodhi, backtrack, elive, debian, mandrake, mandriva, solydx, solydk, freebsd, mageia ကငါ့ကိုစလိမ့်မည်မဟုတ်၊ fedora, opensuse, pclinuxos, puppy, centos lajde, linuxmint, lmde unofficial kde, gnewsense, wifislax နှင့်အခြားအမည် ၃ ခုနှင့်ငါမမှတ်မိသောအခြား ၃ ခု၊ ငါနာမည်တွေမှတ်မိဖို့ distrowatch ကိုကြည့်ခဲ့ရတယ်၊ ငါဟာ Manjaro မှာရှိနေတယ်။ ဒါငါ့အဟောင်းပေါင်အတွက်အံ့သြစရာပါပဲ။
အားလုံး install လုပ်ပြီးပါပြီ virtualized ငါ slackware နှင့် arch ကြိုးစားချင်ပါတယ်, gentoo flat out ငါ့ကို install လုပ်ဖို့အချိန် ejhehe စိတ်ကူးစေသည် nauseous ဂျယ်စေသည်
Arch ကိုကျွန်တော်အကြံပြုလိုပါတယ်၊ မင်းစိတ်ပျက်မှာမဟုတ်ဘူး။ Gentoo ကဒီခံစားချက်တွေကိုဘယ်သူ့ကိုမှမဖြစ်စေဘူး၊ အဲဒါကိုသုံးသူတွေတောင်ပြန်လည်မထည့်သွင်းခင်နှစ်ကြိမ်စဉ်းစားသင့်တယ်။ X-)
Gibran barrera ဟုသူကပြောသည်
၁၃ နှစ်ကျော်အခမဲ့ဆော့ဗ်ဝဲဖြင့်မက္ကဆီကိုနိုင်ငံ၊ UNAM-ENAP မှပါမောက္ခဖြစ်ခဲ့သည့်အတွက်ကျွန်ုပ်သည်အချိန်ဖြုန်းတီးခြင်းများမှတစ်ဆင့်အချိန်များစွာရရှိခဲ့သည်။ ယနေ့ငါအကောင်းဆုံး distro သည်ဆာဗာပေါ်တွင်သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အံဝင်ခွင်ကျဖြစ်မှုကိုယနေ့ငါသိသည်။ Desktop နှင့် Desktop တွင်ကျွန်ုပ်သည်ချစ်ခြင်းမေတ္တာဖြစ်သည်။ ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ဝန်းကျင်များတွင်ကျွန်ုပ်၏ Ubuntu LTS option သည်ပြproblemsနာများကိုမပေးနိူင်ပါ။ ပညာရေးနှင့်ပရော်ဖက်ရှင်နယ်ပတ် ၀ န်းကျင်များတွင်ကျွန်ုပ်သည် drives အားလုံးနှင့်အတူ distro လိုအပ်ပါသည်။ ဟုတ်ပါတယ်၊ RHEL နှင့် CentOS တွေဘာပြောမယ်ဆိုတာကျွန်တော်သိတယ်။ စိတ်မကောင်းပါဘူး။ Ubuntu နဲ့စတယ်။ DPKG, APT-GET နှင့် Sinaptic တို့မှဆာဗာနှင့် desktop ပေါ်တွင်သင်ယူပြီး၊ ဖြေရှင်းရန်ကြိုးစားသည် ပြနာများ၊ RPM တွင်အလားတူဖြေရှင်းချက်ကိုစုံစမ်းရန်အချိန်မရှိသေးပါ။ သို့သော်၎င်းသည်သင့်အတွက်အလုပ်လုပ်ပါက၎င်းသည် PACMAN, PET, TAR, TAR-GZ စသည်တို့ကဲ့သို့အသုံးပြုပါ။ အကောင်းဆုံးကသင့်အတွက်အကောင်းဆုံးသောအလုပ်ဖြစ်သည်။ KDE, GNOME, LXDE, XFCE, OPENBOX, CDE သို့မဟုတ်အဆင်းလှသောအနက်ရောင် (သို့) အပြာရောင်မျက်နှာပြင်သည်အတူတူပင်ဖြစ်သည်။ LINUX သည် LINUX ဖြစ်သည်။ သင်ကြိုက်နှစ်သက်ရာအရသာရှိပါစေ၊ သင်၏အိတ်ကပ်ထဲရှိ distro အသစ်တစ်ခုနှင့် USBlive တစ်ခုကိုသယ်ဆောင်ရန်ဘယ်တော့မျှမထိခိုက်ပါ။
Android (မိုဘိုင်းဖုန်းတွင်အနှစ်သက်ဆုံး)၊ Debian (desktop နှင့် server ပေါ်တွင်ကျွန်ုပ်အကြိုက်ဆုံး)၊ MeGoo (အဆက်ဖြတ်ထားသော)၊ Pepermint, Fedora (အလွန်တည်ငြိမ်သောကျွန်ုပ်သည်အမိန့်များနှင့်မကိုက်ညီပါ), Ubuntu (ကျွန်ုပ်သင်ကြားရန်အနှစ်သက်ဆုံး LTS), ubuntu gnome remix, kubuntu, lubuntu (ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုထားသည့် Lightweigh)၊ xubuntu, ubuntu mini remix, ubuntu မီဒီယာ၊ ubutu netbook (အဆက်ဖြတ်)၊ depeen၊ Gos (google service နှင့်အတူ ubuntu ၏မျိုးကွဲ), ubuntu နှင့် xmbc၊ Darwin os (flirtatious) အလွန်အသုံးဝင်သည်။ သစ်တော်သီး၊ Dreamlinux, ubuntu စတူဒီယို (ကျွန်ုပ်၏အကြံပြုထားသောဒီဇိုင်းနှင့်ထုတ်လုပ်မှုသည်ဒေါင်းလုပ်မှထိခိုက်သည်)၊ opensuse၊ ပွင့်လင်း mandrivia, mandrivia, mageia, linux mint debian edition, linux mint (mate), trisquel, trisquel mini (အလွန်) ကောင်းသောကြီးစွာသောအခြားပေါ့ပါး), pc linux (ငါက၎င်း၏ဒီဇိုင်းကိုမကြိုက်ကြဘူး), Puppy (အလွန်ပေါ့ပါးပေမယ့်အစွမ်းထက်), centos (အခြားအကြီးအ server ကို), mackpup (ငါဘာကြောင့်လုပ်ခဲ့ရတာလဲမသိ) Slitaz နှင့် slitaz razor- qt (ရပ်တည်မှုကိုနာကျင်စေသည်၊ ကျွန်ုပ်၏ဂရပ်ဖစ်ကဒ်ကိုဘယ်တော့မှမထုတ်ပါနှင့်)၊ manjaro (အေးမြ။ အလုပ်လုပ်သော), elementar နှင့် (သင် ubuntu lts ကိုသိလျှင်အချက်မရှိပါ), chakra (လှပပြီးတည်ငြိမ်သော), Partet မှော် (partitions အတွက်အကြီး, ငါ gparted livecds ပိုမိုလက်ရှိမတည်ငြိမ်သောစွမ်းဆောင်ရည်ပတ်ဝန်းကျင်များအတွက်သာ), clonzilla (ငါကအများကြီးကိုအသုံးပြုခဲ့သည်) နှင့် သို့သော်ပုံတူကူးထားသည့် disk များနှင့်) Kaspersky linux (အထောက်အပံ့မရှိဘဲ၊ လွန်ခဲ့သော ၈ နှစ်ခန့်ကကျောက်မျက်)၊ ဝက်ဘ်နှင့်ပွင့်လင်းသော webos များ (ရပ်စဲခဲ့ပြီးအလွန်ကောင်းသည့်အထောက်အပံ့မပါဘဲ) အလွန်ဆိုးရွား solos os (နောက်ထပ်မကြီးသောအခြားကြီးမားသောတစ်ခု) ကျွန်တော်တို့ကိုစွန့်ခွာသွားသည်၊ ရပ်တန့်သွားသည်။ ရှည်လျားသည်။ voyager (လှပပြီးအလွန်ကောင်းမွန်သည်၊ သူတို့စီမံကိန်းကိုစွန့်ခွာခဲ့ရသည်ကနာကျင်စေသည်)၊ MythTV, 8 Studio, EasyPeasy (Ubuntu 64 netbook တွင်ကျွန်ုပ်၏ပထမ ဦး ဆုံးချစ်ခြင်းမေတ္တာ၊ netbook မျက်နှာပြင်နှင့်တကွ၊ အလင်းရောင်နှင့်လှပပြီးရပ်စဲသည်) ), ကြားနေ။
သူတို့ linux မဟုတ်ပေမယ့်သူတို့ကဝမ်းကွဲများ၊ pc bsd (ကျွန်ုပ်၏လတ်တလော BSD နှင့်တကယ်ဖော်ရွေ)၊ FreeBSD (အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသောဆာဗာတွင်ချစ်ခြင်းမေတ္တာ) GostBSD (အရင်းအမြစ်အနည်းငယ်သာရှိသောပတ်ဝန်းကျင်ရှိအခြားကျောက်မျက်) ဖြစ်သည်။
Gibran Barrera အားပြန်ကြားပါ
ငါသည်သင်တို့ကို bro, DEBIAN AND ANDROID စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းတွေ !!!!!
ငါမှာ Ubuntu ပါတဲ့ versionitis လည်းရှိတယ်။ ဒါပေမယ့်ငါထင်တယ်ဘာလို့ Linux ကဘာလို့ဒီလောက်များရတာလဲ။ ကျွန်ုပ်အနေဖြင့် ၆ လတကြိမ်ပုံနှိပ်ရန်မလိုအပ်သောအရာတစ်ခုခုကိုလိုချင်လျှင်။
၂- LMDE (Debian Edition)
LMDe သည်ကျွန်ုပ်အသုံးပြုသောအရာဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်အလွန်ပျော်ရွှင်မိပါသည်။ အထူးသဖြင့်ပြန်လည်ထည့်သွင်းခြင်းမပြုဘဲမကြာခဏ update လုပ်ခြင်းဖြင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်လိုအပ်ရာအားလုံးကိုဖြည့်ဆည်းပေးသည်။
စုံစမ်းမှု (virtual machine ပေါ်တွင်)၊ Debian, Kali, Arch, OpenSuse အားလုံးသော်လည်းအကြပ်အတည်းအားလုံးဖြေရှင်းပြီးဖြစ်သည်။
mmmm ... ငါကပိုပြီးတည်ငြိမ်တဲ့သုံးစွဲသူပါ။ တစ်ခုခုကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်မယ်ဆိုရင်အချိန်အတော်ကြာသုံးထားတယ်။ ဒါကြောင့်ငါမသုံးခဲ့ဘူး ...
7.- OpenSuse (အလုပ်မှာ)
8.- Edubuntu (အလုပ်မှာ)
9.- Ubuntu ဆာဗာ (အလုပ်မှာ)
10.- CentOS (အလုပ်မှာ)
ထိုသို့ xP ပါလိမ့်မယ်
ငါ GNU / Linux ကိုစတင်ခဲ့သောနှစ်နှစ်ခွဲအတွင်းအောက်ပါတို့ကိုအသုံးပြုခဲ့သည်။
2 Mint (Mate - Cinnamont - KDE - Debian)
9 - မူလတန်း
၎င်းသည်ကျွန်ုပ်အားစနစ်ကိုမည်သို့ကိုင်တွယ်သည်ကိုနားလည်ရန်အလွန်ကောင်းသောအတွေ့အကြုံဖြစ်စေသည်။ ၎င်းသည်ကြိုးစားခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ပုံစံချခြင်း၊ ထပ်မံကြိုးစားခြင်းစသည်တို့ဖြစ်သည်။ ပျော်စရာပဲ
Ubuntu, Kubuntu, Xubuntu, Lubuntu, OpenSuSE, Linux Mint, CentOS, Red Hat, Debian, Fedora, elementary OS ယခုငါ Arch Linux ကိုအသုံးပြုနေသည်။
ubuntu ကိုမသိခင် virtualbox အကြောင်းနှင့်ယနေ့ debian (သို့) ArchLinux (ကျွန်ုပ်သည်၎င်းတို့တွင် dual dual ဖြင့်ရှိနေသည်) တွင် virtual machine ၃၁ ခုရှိသည်။
ဆော့ဗ်ဝဲ၊ lvm နှင့် crypto အတွက် raid 32 တွင် GENTOO ကို install လုပ်တော့မည်ဖြစ်သောကြောင့်ယခုအပတ်တွင် # 1 ရလိမ့်မည်။
Slackware, Debian နှင့်အခြားဘာမျှမ🙂
ခေါင်းစဉ်ကောင်းတယ်။ Linux ထဲကို ၀ င်တာနောက်ကျနေပြီ။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါကငါ့ကို install လုပ်ခွင့်မပြုတဲ့စက်တစ်ခုရှိလို့ပဲ (kernel panic ထဲကတစ်ခုခုနဲ့ installation ကိုဆက်မလုပ်နိုင်တော့ဘူး) တစ်နေ့မှာသူငယ်ချင်းတစ်ယောက်ကငါ့ကို ubuntu တပ်ဆင်ရန်မကြိုးစားမီ windows တစ်ခုကိုပြန်လည်တပ်ဆင်ရန်မှတ်စုစာအုပ်ယူလာသည်။ အံ့ဖွယ်အမှုများ နောက်တစ်နှစ်အကြာမှာငါ windows ပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ရလဒ်ကျွန်တော် acer netbook ကိုဝယ်လိုက်တယ်။ မင်းလိုချင်တာကို install လုပ်ခွင့်ပေးလိုက်တယ်။ ပထမဆုံး install လုပ်တာက Tuquito3ပါ။ သူတို့အားလုံးကိုကျွန်တော်ကြိုးစားခဲ့ပြီးပြီ။ ငါ Mint 14 နဲ့အတူရှိပြီး Linux mint 13 မှာအရင်ကအကောင်းဆုံးပါ။ ငါဗားရှင်းမပြောင်းပါဘူး ငါ live mode မှာဗားရှင်းအသစ်ကြိုးစားပါ။
>> ငါ Ubuntu မှာစလုပ်ခဲ့တယ် (များစွာသောလို)
>> Linux Mint ကို
>> ပွင့်လင်း Suse
>> Arch Linux ကို
>> Gentoo (သိပ်မကောင်းဘူး)
>> မူလတန်း OS
>> Manjaro (ငါ openbox ကိုချစ်တယ်, ဒါကြောင့်အတိအကျမနေ့ကသာ, ကနှင့်အတူအချိန်ကြာမြင့်စွာကြာခဲ့သည်
မနေ့ကငါ Arch နဲ့အတူတူလိုပဲ root partition ကိုဖျက်လိုက်တယ်။
>> Crunchbang (ဒီနေ့မှ🙂ကျွန်ုပ်သည်၎င်းကိုနှစ်သက်သည်၊ ကျွန်ုပ်ဒီမှာနေရန်မျှော်လင့်ပါသည်။ သို့သော်ကျွန်ုပ်သည်
ငါပြောင်းလဲလိမ့်မယ် haha ​​ငါသိ၏။
ကြောင်းနိုင်ရန်အတွက်ငါ hahaha နီးပါးသေချာပါတယ်
Rosa Linux ကိုမေ့လိုက်ပါ၊ အကောင်းဆုံး distro သော်လည်းကျွန်ုပ် hardware သည်အများကြီးမကူညီနိုင်ပါ
ငါပုံမှန်သုံးခဲ့တဲ့သူများ - SuSE, Debian, Fedora, Sabayon နှင့် Chakra ။
ငါရံဖန်ရံခါငါကြိုးစားခဲ့သူမြား: Knoppix, Frugalware, Mandrake-Mandriva ။
ငါ Linux မှာ SuSE ကိုသုံးပြီးမြို့ထဲမှာရောင်းဖို့ရှာပြီးနောက်ဝယ်လိုက်တယ်။ အမှန်တရားကတော့သူကဆော့ဖ်ဝဲအများကြီးနဲ့လာပြီးထောက်ခံမှုအများကြီးရခဲ့တယ်။ နောက်ပိုင်းတွင်ကျွန်ုပ် SuSE ကိုရောင်းရန်မရှိတော့သောအခါ Debian ကိုထည့်သွင်းခြင်းဖြင့်ကျွန်ုပ်ဘဝကိုအနည်းငယ်ရှုပ်ထွေးစေခဲ့သည်။ သို့သော်၊ ကျွန်ုပ်တွင် graphical installer မရှိသေးသည့်အခါသင်၏ hardware ၏ဒေတာအားလုံးကိုထည့်သွင်းရန်လိုအပ်လာသောအခါ၊ တပ်ဆင်ခြင်း။ ပြီးတော့ curl ကိုပိုပြီး curl လုပ်ဖို့အတွက်ငါ xid version ကိုအမြဲသုံးခဲ့တယ်၊ Windows မှာမျောက်ကိုကစားတဲ့အခါငါအမြဲတမ်းရှိတယ်။
နောက်ပိုင်းတွင် Sid ၏ပြcrနာများနှင့်မှီခိုနေသည့်အက်ကြောင်းများကိုကျွန်တော်စိတ်ကုန်သွားပြီးစိတ်ကျေနပ်စရာကောင်းသည့် kernel နှင့် NVIDIA ယာဉ်မောင်းပြissuesနာများက Sabayon သို့ကျွန်ုပ်ကိုတွန်းပို့သည့်အထိ Fedora သို့ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်ခဲ့သည်။ Gentoo-based distro ဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်စနစ်ကိုမတည်မငြိမ်ဖြစ်စေသောနောက်ဆုံးသတင်းများကိုသူတို့နားမလည်မချင်းကျွန်ုပ်သည်အချိန်အနည်းငယ်ကြာအောင်ပျက်ဆီးစေခဲ့သည်။ ထိုအခါငါကြိုးစားခဲ့သမျှမှ (SSE) Chakra GNU Linux ရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သမျှတွင်အံသြဖွယ်အကောင်းဆုံးအရာတစ်ခုကိုရှာဖွေတွေ့ရှိခဲ့သည်။
Chakra GNU Linux ဖြင့်ကျွန်တော့်ဘဝ၏ဘ ၀ ပျက်ပြားမှုကိုတွေ့မြင်ခဲ့ရသော်လည်းတကယ့်တစ်ခါမှပြိုလဲခြင်းမရှိခဲ့ပါ။ သုံးစွဲသူများဝင်ရောက်စွက်ဖက်မှုလိုအပ်သည့် system update တစ်ခုအပြီး၌ကျွန်ုပ်၌ပြaနာတစ်ခုသာရှိခဲ့သည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ထပ်ထည့်ပါမယ်။ ကျွန်တော့် WIFI နဲ့ Windows7drivers တွေပြproblemနာတက်ပြီးရင် Redmon operating system ကို SHIT ဆီပို့ဖို့ဆုံးဖြတ်လိုက်တယ်။ Ubuntu 13.04 နဲ့လုံးဝအစားထိုးလိုက်တော့မယ်။
David Mitos ကိုပြန်ပြောပါ
Ubuntu၊ Kubuntu၊ Puppy Linux၊ Chakra
ကြိုးစားကြည့်ပါ၊ ကျွန်ုပ်အနည်းငယ်ကြိုးစားကြည့်ပြီးပါပြီ၊ သို့သော်ကျွန်ုပ်ကိုတစ်ပါတ်ကျော်အကြာခံသောသူများမှာ ((အစဉ်အလာအတိုင်း)
Ubuntu_______ ပထမ ဦး ဆုံး distro
Archbang_____ ငါ pacman တွေ့ဆုံခဲ့ပြီးဘယ်မှာ
လက်ရှိ Debian_______good နှင့်ကျွန်ုပ်၏အလယ်တန်း distro
ဒီဆောင်းပါးတွေကဘာမှအထောက်အကူမပြုပါဘူး၊ ဒီဘလော့ဂ်ဟာပရိသတ်တွေကိုသူတို့ရဲ့ဇာတ်လမ်းတွေကိုရေးခွင့်ပြုခဲ့ပြီးတဲ့နောက်သင်ခန်းစာတွေ၊ ဖြေရှင်းနည်းတွေမကျန်တာကိုဒီ blog ကရပ်တန့်လိုက်ပါတယ်။ ဘာလို့လဲဆိုတော့ဒါကအရမ်းကောင်းတယ်။
Richard Stallman ကိုပြန်သွားပါ
အသိအမှတ်ပြုခံရသူတစ် ဦး ဖြစ်သော Richard Stallman ၏အမည်ဖြင့်ကာကွယ်ထားသောအမည်ဝှက်စာဖတ်သူသည်ဖော်ပြချက်၏အဓိပ္ပာယ်အမှန်ကိုများစွာစဉ်းစားရန်၊ အောက်ပါအချက်များကိုပြောသင့်သည်။
ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်ကိုပြသရန်ခိုင်မာသောအငြင်းပွားမှုများမရှိပါ။ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သည့်မှတ်ချက်တစ်ခုတွင်ကျွန်ုပ်ပါ ၀ င်သည်။
အကယ်၍ ၎င်းသည်ဖြစ်ပျက်နေမှုကိုရပ်တန့်ပါကယူအက်စ်အေကိုပြောင်းလဲရန်ပင်နှောင့်နှေးခြင်းနှင့်သူတို့ကိုယ်သူတို့ထောက်ပံ့ရန် (105345/105346) ကိုချက်ချင်းမှတ်ချက်မပေးသောသူများရှိနေသည်။ ဒီအပြင်၊ ဒီ post ဟာအသုံးပြုမှုခေတ်ရေစီးကြောင်းတွေဘယ်နေရာမှာရှိနေတယ်ဆိုတာကိုကြည့်ဖို့နဲ့ကြော်ငြာမရှိတဲ့ distros တွေကိုသိဖို့အလွန်အသုံးဝင်တယ်။ ကျွန်တော့်ကိစ္စမှာဒီ post ကိုကျေးဇူးတင်ပါတယ်၊ ကျွန်ုပ်ကြိုက်နှစ်သက်သော live cd SysRescCD အတွက် slackware ဖြင့်အစားထိုး RIP linux နှင့်သိကျွမ်းလာပါလိမ့်မည်။
မှတ်ချက်ပေးတဲ့အတွက်ကျေးဇူးတင်ပါတယ် မင်းဟာအကောင်းဆုံးပုဂ္ဂိုလ်လို့ငါထင်တယ်၊ ဘာလို့လဲဆိုတော့မင်းကကိစ္စတွေကိုအလေးအနက်ထားဆုံးဖြတ်မိလို့ပါပဲ။ မင်းအကြံဥာဏ်တွေကိုငါယူမယ်။ ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့ငါ့ကိုအတူတူပြောနေကြတဲ့လူနှစ်ယောက်ရှိနေပြီ။ အရာရာတိုင်းဟာနည်းပညာဖြစ်ဖြစ်၊ အလေးအနက်မရှိသင့်ဘူးလို့ကျွန်တော်ထင်တယ်၊ လူသားတွေရဲ့စိတ်အေးအေးထားဖို့နဲ့မျှဝေဖို့နေရာအမြဲတမ်းရှိတယ်။ ငါပါ ၀ င်ရန်သင်ကိုဖိတ်သည်။ ဟွန်ဒူးရပ်စ်မှကြိုဆိုပါတယ် 🙂
၎င်းသည်အပြုသဘောဆောင်သည့်တိုင်မှတ်ချက်များကိုလျစ်လျူရှုထားသည်။ တစ်နည်းနည်းနဲ့ဒီအချက်အလက်တစ်စုံတစ် ဦး ကအသုံးဝင်ပါလိမ့်မည်။ ပရိုဂရမ်မာဆရာတစ် ဦး ပြောခဲ့သည့်အတိုင်းသတင်းအချက်အလက်အားလုံးသည်လုံးဝအသုံးမကျပါ။ မင်္ဂလာပါ
ကောင်းပြီ၊ ဘလော့ဂ်သည် tutorials နှင့်ဖြေရှင်းနည်းများကိုသာတိတိကျကျသတ်မှတ်ထားခြင်းမဟုတ်ပါ။ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော်မကြာသေးမီက GNU-Linux ရှိပြproblemsနာများသည်အထီးကျန်မှုနည်းပါးသောကြောင့်သီးခြားပြproblemsနာများရှိပါက၎င်းတို့ကိုဤနေရာတွင်အသံကဒ်များနှင့်ပြproblemနာကိုဖြေရှင်းရန်နည်းလမ်းများအဖြစ်ကျွန်ုပ်တို့မြင်ရလိမ့်မည်။ CPU ၏အပူချိန်ကိုလျှော့ချရန်။ မည်သို့ပင်ဖြစ်စေ၊ သင်လိုချင်သောသင်ခန်းစာပိုများများရှိပါက၊ သင်အကြံပြုထားသောဆောင်းပါးများကိုသင် log in လုပ်နိုင်သည်၊ သို့မဟုတ်ပါကလူတို့အားသူတို့လိုချင်သည့်အတိုင်းဖော်ပြခွင့်ပြုပါ။ ဆောင်းပါးတပုဒ်ဟာဆောင်းပါးတပုဒ်ပါ၊ အဲဒါကတစ်ခုခုကိုကူညီလိမ့်မယ်။ လုံးဝအသုံးမကျသောသတင်းအချက်အလက်မရှိပါ။ မင်္ဂလာပါ
ကျွန်တော့်ရဲ့ Linux ကိုနှစ်အနည်းငယ်အတွင်းမှာပဲငါဟာထင်မြင်ချက်တွေကြားမှာရှိတဲ့ distros အမြောက်အမြားကိုဖြတ်သန်းခဲ့ပြီးခရီးရှည်တစ်လျှောက်မှာ (Ubuntu ကနေ Ubuntu ကနေအခြားတစ်ခုဆီကိုပြန်သွားရတယ်) အတွက်တစ်ကြိမ်ထက်မကသောကြောင့် အကြောင်းပြချက်များနှင့်သိချင်စိတ်ထဲက။ သဘာဝကျကျငါစတင်ခဲ့သည်:
ဤရွေ့ကားနောက်ဆုံးနှစ်ခုငါမှတ်စုစာအုပ်တစ်ခုချင်းစီကို install ရှိသည်။
အချို့ (ကံကောင်းထောက်မစွာပင်အနည်းငယ်) သည်ဤဆောင်းပါးအမျိုးအစားများသည်မည်သည့်အရာမျှမပါ ၀ င်ကြောင်းတွေ့မြင်သော်လည်း၊
ကျွန်ုပ်တို့အများစု (ကိုယ့်ကိုယ်ကိုယုံကြည်သည်နှင့်ပါ ၀ င်သည်) သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုဆုံးမသည်၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်အင်တာနက်ပေါ်တွင်လေ့လာသင်ယူပြီး၎င်းကို (စမ်းသပ်မှုနှင့်အမှားအယွင်းသို့မဟုတ်အောင်မြင်မှု) ကိုစတင်ကျင့်သုံးခြင်းဖြစ်ပြီးဤဆောင်းပါး၏ဖြစ်ရပ်တွင်သိလိုစိတ်ပြင်းပြသူများစွာရှိကြောင်းပြသရန်ဖြစ်သည် နှင့်ရှားပါးသောမျိုးစိတ်မဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကျွန်ုပ်တို့၏လိုအပ်ချက်နှင့်ကိုက်ညီသည်အထိဖြန့်ဖြူးခြင်းသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကြောက်ရွံ့မှုပျောက်ကွယ်သွားပြီးဆက်လက်ကြိုးစားနေသည်။ သူတို့သည်ကျွန်ုပ်သည် ၀ င်းဒိုးတွင်ရှိနေသည်ကိုတွေ့လျှင်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်သည် GNU / Linux နှင့်မတူညီသောပရိုဂရမ်တစ်ခုလိုအပ်သောကြောင့်၎င်းသည်ကျွန်ုပ်နှင့်မတူနိုင်ပါ။ @Eduardo နှင့် @Od_air တို့အားသွေးဆောင်မှုကိုတွန်းလှန်ပါ
ကောင်းပြီ၊ ရောနှောပေါင်းစပ်မှု: (ကွဲပြားခြားနားသော SO များ)
Mandrake Linux (နောက်ပိုင်း mandriva)
Gentoo (အဓိက distro)
Fedora & centos (powerpc ကျော်)
Bristol က ဟုသူကပြောသည်
ငါကသီးခြားလွတ်လပ်ပြီးပြုပြင်ပြောင်းလဲမှုများအတွက် archlinux တွင်ငါရှိနေသည်… linux mint, ubuntu, mageia, mandriva, xubuntu, pinguy, debian, fedora, open suse, elementary os, lite, trisquel, manjaro …။
ကြည့်ကြရအောင်။ Mandrake (Mandriva မဟုတ်)၊ Linux Linux၊ Rock Linux, Ubuntu, SuSE (SuSE ဖြစ်စဉ်)၊ Puppy Linux, Debian, Kubuntu, Lubuntu, PearOs, Darwin (linux), ElementaryOS, FreeBSD, GhostBSD, Gentoo, Slackware, Tiny Core , Damm Small, PCLinux, Slax, Solaris, Corel Linux၊ PinguyOS, Knoppix နှင့်လက်ရှိ Mint Linux Mint ။ သူကငါ့ကိုထားခဲ့တာသေချာတယ်၊ ငါအရမ်းသိချင်ခဲ့တယ်။
Sebastian Arena ဟုသူကပြောသည်
Ubuntu ၏ version 9.10 တွင်ပါ ၀ င်သည့်ကြိုဆိုမှုကိုလက်ခံခဲ့သည်။ ထိုအချိန်မှစ၍ ကျွန်ုပ်သည်၎င်း၏ဗားရှင်းတစ်ခုစီကိုကြိုးစားစမ်းသပ်ခဲ့ပြီးတစ်ချိန်တည်းမှာပင်ကျွန်ုပ်သည် Fedora, openSUSE, Xubuntu နှင့် ElementaryOS တို့ကိုစိတ်ဝင်စားခဲ့သည်။ သင်ကဲ့သို့သောငါနှင့်အတူငါကငါနှင့်အတူနေလိမ့်မည်ဟုတငါထင်, ငါပြုပေမယ့် 12.10 နောက်ပိုင်းမှဗားရှင်းနှင့်အတူသဟဇာတလျှောက်လွှာကို install နိုင်ဖြစ်ခြင်း၏စိတ်ကူးအတွက်အစားထိုး (ကသတိရရမည်ဖြစ်သည် နောက်ဆုံး Elementary ဗားရှင်းကို ၁၂.၀၄ တွင်တည်ဆောက်သည်။
အသွင်အပြင်အားဖြင့်ကြည့်ခြင်းအားဖြင့်ကျွန်ုပ်သည်ယုံကြည်စိတ်ချမှုရှိရုံသာမက၎င်းသည်ထူးခြားသောစွမ်းဆောင်ရည်ကြောင့်၎င်းသည် BIOS ကို update ပြုလုပ်ပြီးနောက်၎င်းသည်ဖြစ်နိုင်ချေရှိသောအကျိုးဆက်များကိုမသိဘဲကျွန်ုပ်မဖြေရှင်းနိုင်သောအမှားအယွင်းအချို့ကိုရှောင်ရှားနိုင်ပြီး၎င်းကိုနောက်ပြန်လှည့ ်၍ မရပါ။ ပြန်လည်ထူထောင်ရေးဒီဗီဒီများအနေဖြင့်ကွန်ပျူတာသည်အလိုအလျောက်ပိတ်ခြင်းမခံရဘဲလုပ်ငန်းစဉ်၏အချို့အပိုင်းကိုဖြတ်ကျော်။ မရပါ။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုနုတ်ထွက်လိုက်ပြီ၊ ဒါပေမဲ့ဒီဖြန့်ဖြူးမှုအောက်မှာအမှားတွေဟာတစ်ကြိမ်ထက်မပိုခဲ့ဘူး၊ အခုငါ Ubuntu 13.10 ကိုသုံးနေပေမဲ့ငါစမ်းသပ်ချင်တာမဟုတ်တဲ့အတွက်ငါ့ကိုအားပေးခဲ့တဲ့တစ်ခုတည်းသောစနစ်ဆီမကြာခင်ပြန်လာဖို့မျှော်လင့်ပါတယ် ယခုအချိန်တွင်ပိုမို။
Sebastián Arena သို့ပြန်သွားပါ
မှတ်မိဖို့ကောင်းသောလေ့ကျင့်ခန်း (ပြီးတော့သူတို့မှတ်မိဖို့ပြောတာကတစ်ဖန်ပြန်အသက်ရှင်ဖို့ဖြစ်တယ်) ။ ငါ ၂၀၀၅ ခုနှစ်တွင် Mandriva LE 2005 နှင့်စတင်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်သည်ကျွန်ုပ်ထည့်သွင်းခဲ့ပြီးသောအချိန်အကြာကြီးကိုသာဖော်ပြလိမ့်မည်။
Knoppix 3.7 (စကားမစပ်မက္ကဆီကန် Knoppix)၊ Suse, Guadalinex, Debian, ubuntu, Zenwalk, DSL, Puppy, Tinycore, PCLinuxOS, PearLinux, LinuxMint, Trisquel, VectorLinux, Slax နှင့် eOS ။
အထူးဖော်ပြချက် - BackTrack Linux ။
၁- ကျွန်ုပ်သည် Kubuntu ဖြင့်စတင်ခဲ့သည်၊ အဘယ်ကြောင့်ဆိုသော် KDE Desktop သည် windows များနှင့် ပို၍ ဆင်တူသည်၊ ကျွန်ုပ်သိကျွမ်းသောအရာတစ်ခုခုလိုအပ်သည်ကိုကြားသောကြောင့်
၂-၅ မိနစ်စမ်းသပ်ပြီးနောက် .. ငါ ubuntu ပြောင်းရန်ဆုံးဖြတ်လိုက်သည်
ကျွန်တော်ရဲ့ laptop က ubuntu ကိုသည်းမခံသောကြောင့် ... ငါ Lubuntu ကိုလွန်သွားသည်
(၄) Lubuntu သည် desktop ပေါ်တွင်စွမ်းဆောင်ချက်များစွာမရှိသောကြောင့်အသုံးမပြုနိုင်သောကြောင့် Xubuntu သို့သွားပါ
၅။ All -Ubuntu ၏တစ်ပတ်ပတ်လုံးအသုံးပြုခြင်းသည်ရှင်းလင်းချက်မရှိဘဲပျက်ခြင်းကြောင့်ငါ Debian ကိုပြောင်းလဲခဲ့သည်
၆။ သန်းပေါင်းများစွာအမှားအယွင်းများကြောင့်ကျွန်ုပ်သည် Debian6အသုံးပြုရန်ကြိုးပမ်းမှုကိုစွန့်လွှတ်ခဲ့သည်၊ ကျွန်ုပ်ထင်မြင်ချက်မှာအမှိုက်သရိုက်သည် ... ကျွန်ုပ်စမ်းသပ်ခဲ့သည့်ကွန်ပျူတာများအားလုံး (၄) ကိုရှင်းပြစရာမလိုပဲထည့်သွင်းထားသည်။
7- ငါ Opensuse နှင့်အတူကြိုးစားခဲ့သည်
၈- opensuse ဟာမဖျောက်ဖျက်နိုင်တာကိုမြင်ရတော့ Fedora ကိုကျွန်တော်စမ်းကြည့်ခဲ့တယ်။
9- ဤအချိန်တွင်ကျွန်ုပ်သည် terminal နှင့်ပိုမိုသိရှိပြီးဖြစ်သည်။ Fedora တွင်အများဆုံးအသုံးပြုသော command များသည်ရှုပ်ထွေးပြီးစိတ်ပျက်စရာကောင်းသည်။ ငါ Ubuntu သို့ပြန်သွားသည်။
10- Ubuntu ကို သုံး၍ system အကြောင်းပိုမိုလေ့လာလိုသည်။ ဆုံးဖြတ်ချက်မချမချင်းအလွန်အသုံး ၀ င်သောအရူးလုပ်သည်။ Ubuntu ရိုးရိုးလေး၊ လွယ်ကူတယ်၊ Archlinux ကို install လုပ်တယ်။
11- Arch ကိုမအောင်မြင်ရန်ကြိုးစားမှု ၁၀ ​​ခုပြီးနောက်ကျွန်ုပ်သည်စနစ်တကျမှန်ကန်စွာအလုပ်လုပ်နိုင်ခဲ့ပြီးယနေ့တိုင်အောင်၎င်းကို xD ကိုသုံးသည်။
စကားမစပ် Linux Mint ငါ Ubuntu နဲ့တစ်ချိန်တည်းမှာကြိုးစားခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်သူကအတိအကျအတူတူဘဲ၊
ကောင်းပြီ၊ ငါကိစ္စကိုပြောမယ်၊ ၎င်းသည်အခမဲ့ဆော့ဝဲလ်လောကတွင်ရှားပါးသော၊ ငါ Ubuntu 7.10 ကနေစပြီးပြandနာကမီးနဲ့ cube ရှိဖို့ပဲ .. WOW !!
သို့သော်ကျွန်ုပ်၏စင်တာသည်ဆော့ (ဖ်) ဝဲ (လ်) မဟုတ်ပါ၊ အကြောင်းကြားပြီးဖြစ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာမတိုင်မီကကျွန်ုပ်သည် "linux bible" ကိုဖတ်ပြီးကျွန်ုပ်သည် "free soft" ၏ခေါင်းပေါ်တွင်ထိုင်နေခဲ့သည်။
သုံးလအကြာတွင်မှန်ကန်စွာမှတ်မိလျှင် (နောက်ထပ်မပိုပါ) ubuntu သည်ကုမ္ပဏီတစ်ခုဖြစ်ကြောင်းသေချာစေရန်နှင့်အခမဲ့မဟုတ်သောဆော့ဖ်ဝဲကိုအသုံးပြုသူအားအလွယ်တကူရရှိနိုင်စေခြင်း၊ ဥပမာအားဖြင့် - ubuntu ၏မိခင်သည် Debian ဖြစ်ပြီး၎င်းသည်အခမဲ့ distro (ထိုအချိန်က kernel တွင် blobs များပါ ၀ င်သော်လည်းနှစ်ပေါင်းများစွာကြာသည့်တိုင်အောင်ကျွန်ုပ်မသိခဲ့ပါ) ကျွန်ုပ်သည်ခုန်။ debian ကိုထည့်သွင်းခဲ့သည်။ စာတွေဖတ်ဖို့နဲ့ဒီဟာကိုဘယ်လိုပြုပြင်ရမလဲဆိုတာရက်အနည်းငယ်အတွင်းမှာအများကြီးပိုကုန်ကျခဲ့ပါတယ်။ အဲ့ဒီအချိန်ကစပြီးမကြာသေးခင်ကအထိ Debian (၅ နှစ်) နဲ့ကျွန်တော်သာယာတဲ့အိမ်ထောင်ကိုပိုင်ဆိုင်ခဲ့ပြီးဘယ်တော့မှမပြောင်းလဲချင်ဘူး။ GNU / Linux distros များသည်ထုပ်ပိုးခြင်းဆိုင်ရာမူဝါဒများနှင့်စည်းမျဉ်းစည်းကမ်းများနှင့်မတူကြောင်းကျွန်ုပ်ချက်ချင်းသဘောပေါက်လိုက်သည်။ Mint၊ Ubuntu ကိုယ်တိုင်၊ Mandriva, Centos, ufff .. ထောင်ပေါင်းများစွာသောဖြိုဖျက်သော distros များ၊ ဖြိုဖျက်သော distros များကိုကျွန်ုပ် (သို့မဟုတ်ကျွန်ုပ်မလိုချင်ပါ) အသုံးပြုရန်အတွက်
ဇာတ်လမ်းဘယ်လိုအဆုံးသတ်လဲ။ KDE ကိုငါအရမ်းပူတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ .. ၎င်း၏ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုသည်ကျွန်ုပ်အတွက်အလေးအနက်ရှိသည်ဟုထင်ရသည် (၎င်းသည်ကျွန်ုပ်ထင်သည်သာမက၎င်းသည်မဟုတ်ပါ) ၎င်းသည်အလုပ်လုပ်ရန် systemd ပေါ်တွင်မူမတည်ပါ (systemd သည် Red-Hat မှတီထွင်ထားသောကိရိယာဖြစ်ပြီး၎င်းကို Linux အတွက်သီးသန့်အသုံးပြုသည်။ knnn)၊ gnome3ပေါ်တွင်မူတည်သည် (viz: gnome developer များသည် red-hat … hmm …) အတွက်အလုပ်လုပ်သည်။ ငါ aptosid နှင့်အလုပ်လုပ်သည် achlinux ကိုစမ်းသပ်ပြီးတော့ kde အတွက် parabola ကိုသုံးမယ်။ ပြီးပါပြီ ? ဟေး
Fedora -> Arch Linux -> Gentoo ။
Miguel P ဟုသူကပြောသည်
တစ်နှစ်လျှင် ၂၃ ခုဖြန့်ဝေခြင်းကိုအသုံးပြုခြင်းသည်ကျွန်ုပ်အတွက်ဂုဏ်ယူစရာဖြစ်သည်ဟုမထင်ပါ။ ၁၅ ရက်တစ်ကြိမ်လည်ပတ်လည်ပတ်မှုစနစ်ကိုပြောင်းလဲခြင်းသည်သင်၌အချိန်များစွာရှိသည်သို့မဟုတ် pc ၏ရှေ့မှောက်၌သင်အသုံးပြုရသောအချိန်သည်အရေးကြီးသောအလုပ်ကိုလုပ်ရန်မဟုတ်ပါ။ ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရ၊ သင်၏လိုအပ်ချက်များနှင့်အညီအကောင်းဆုံးညွန်ကြားချက်ပေးသောဖြန့်ဝေမှုသုံးခုသို့မဟုတ်လေးခုကိုသင်စမ်းကြည့်ပါ၊ ၎င်းတို့ထဲမှတစ်ခုကိုသိမ်းထားရန်နှင့်၎င်းကိုအမှန်တကယ်အသုံးပြုရန်သင်ယူပါ။
Miguel P. သို့ပြန်သွားရန်
ငါသိတယ်၊ ငါဂုဏ်ယူတာမဟုတ်ဘူး၊ ဒါပေမယ့်ငါလည်းရှက်လည်းရှက်တာမဟုတ်ဘူး။ ငါ့အိမ်ကိုတွေ့ပြီ၊ ပြတင်းပေါက်လေးကကောင်းတယ်။
နက်နက်ရှိုင်းရှိုင်းကျွန်ုပ်သည်များများစားစားမဟုတ်ပါ။ ကျွန်ုပ်ထင်သည်အတိုင်း "အသုံးပြုပါ" သင်ရည်ရွယ်ထားသည်။ pufff ကျွန်ုပ်မသိပါ။ ၂၀၀၀ ပြည့်နှစ်မှအချိန်ကာလကိုရယူပြီးမည်သည့်အရာအားငါ "အသုံးပြုခဲ့သည်" ကိုခွဲထုတ်ရန်လိုပါသည်။
အဓိကအချက်ကဆွေမျိုးဖြစ်တယ်၊ ရာနဲ့ချီတဲ့ distros တွေကို Debian ဆီကဆင်းသက်လာတယ်။ ဒါကြောင့်ငါလည်းသူတို့ကိုသုံးတယ်။
ငါထင်တာကတော့မင်းကတခြားအရာတွေထက် graphical environment ကိုပိုပြီးညွှန်ပြနေတယ်ထင်တယ်။ သင်၏မေးခွန်း, lubuntu, kubuntu … .it သည်အတူတူမဟုတ်ဘဲအခြားအရောင်တစ်မျိုးဖြစ်သည်။
သင်၏ကွန်ပျူတာပေါ်တွင် operating system မည်မျှတပ်ဆင်ထားသနည်း။ ၎င်းတို့သည်အခြားသူများမှဆင်းသက်လာသည်ဆိုပါကအလွန်အရေးကြီးသည်မဟုတ်ပါ၊ Xubuntu ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် XFCE ကို Ubuntu ပေါ်တွင်တင်ခြင်းနှင့်မတူပါ။ Archbang ကိုအသုံးပြုခြင်းသည် OpenBox နှင့်အတူ Arch ကိုအသုံးပြုခြင်းနှင့်မတူပါ။
အိုကေ၊ ယခုသင်မည်မျှအသုံးပြုခဲ့ပါသနည်းဟူသောသင်၏မေးခွန်းနှင့်အဘယ်သို့ဆိုလိုသည်ကိုကျွန်ုပ်နားလည်ပါပြီ၊ ကျွန်ုပ်ကွန်ပျူတာများပေါ်တွင် linux kernel ပါသောလည်ပတ်မှုစနစ်ကိုအကြိမ်မည်မျှတပ်ဆင်ထားကြောင်းညွှန်ပြပါသလား။ ဟုတ်တယ်မဟုတ်လား။ ၎င်းတွင် Live cd ပါဝင်ပါသလား။ မရရှိလျှင်ကျွန်ုပ်၏စာရင်းသည်ဂဏန်း ၃ လုံးနှင့်နီးသည်။
ငါပြောချင်တာက၊ တစ်နှစ်မှာ ၂၃ distros စမ်းကြည့်တာမကောင်းဘူးလို့ပြောတယ်၊ (၂၃ ခုလုံးကို install လုပ်ပြီးသက်ဆိုင်ရာအချိန်အတွက်အသုံးပြုဖို့မဖြစ်နိုင်ဘူး)၊ သင်တစ် ဦး မှတစ် ဦး သို့မဟုတ်နှစ် ဦး ကိုအာရုံစူးစိုက်ရန်သင်အပ်နှံသည်ထက်သင်ပိုမိုသင်ယူကြောင်းသေချာပါသည်
Gnu / Linux တွင်သင်ယူခြင်းသည် distros အားလုံးကိုရှာဖွေရန်မဟုတ်ပါ။
သင်အတွက် lubuntu သည် kubuntu နှင့်မတူပါ၊ ကျွန်ုပ်အတွက် debian သည် ubuntu နှင့်တူသည်။ archbang သည် archbang နှင့် debian နှင့်တူသည်။ အဘယ်ကြောင့်? ငါနဲ့တစ်ခုရှိပြီးတစ်ခုကဘာလဲ၊ သူတို့မှာမရှိတာ၊ သူတို့ရဲ့ပရိုဂရမ်တွေနဲ့အထုပ်မန်နေဂျာတွေရဲ့ကွဲပြားခြားနားမှု၊ အခြေခံစနစ်အတူတူပဲစသည်ဖြင့် ...
ဥပမာအားဖြင့်, ငါ debian ထက် (ARV ဝီကီ (ရွှေအလေးချိန်ထိုက်တန်သည်အလွန်အံ့သြဖွယ်) ကိုပိုမိုတိုင်ပင်ဆွေးနွေး။ မင်းရဲ့သီအိုရီနဲ့ငါမလုပ်နိုင်ဘူး။
ငါအများကြီးလေ့လာသင်ယူခဲ့ကြပါပြီအဘယ်သူမျှမအချက်မှာပါပြီ။ ငါကျွမ်းကျင်သူတစ် ဦး မဟုတ်ပါ၊ ကျွန်ုပ်ဤမျှလောက်များစွာသောလူများကိုသုံးခဲ့သည်။ ၎င်းတို့အားလုံး၌ကျွန်ုပ်မဖြေရှင်းနိုင်သောပြproblemsနာများကိုတွေ့ရှိခဲ့ရသော်လည်း၎င်းသည်ဖြေရှင်းနိုင်ခြင်းရှိမရှိကိုလာမည့်တစ်ခေါက်သို့သွားခဲ့သည်။
ငါဘာမှလုပ်ရမည်ကိုမသိ, ငါဘယ်တော့မှငါပြောမည်သို့မဟုတ်အလုံအလောက်ငါသိ၏ဟုပြောလိမ့်မည်မဟုတ်ပါ, ဒါပေမယ့်သင်ကအများကြီးသိကြ, သင်ဖြန့်ဝေအများအပြားမှတဆင့်ခဲ့ကြခြင်းနှင့်သင်ကစစ်မှန်သောကျွမ်းကျင်သူဖြစ်ကြောင်းကိုသိနှင့်ငါသည်သင်တို့အဘို့ငါလေးစားပါတယ်။
ဒါပေမဲ့မင်းဘာကြောင့်ဒီလောက်ရှုပ်ထွေးရတာလဲမသိဘူး၊ တခြားသူတွေကျတော့ငါ့မေးခွန်းကိုကောင်းကောင်းနားလည်ပြီးနွေးနွေးထွေးထွေးပြန်ဖြေကြတယ်။ သင်တပ်ဆင်ပြီးအသုံးပြုသော၊ ရာပေါင်းများစွာသော Operating Systems များကိုတပ်ဆင်ပြီးလျှင်၎င်းနှင့်ဝေမျှပါကသင်မှတ်မိသောအရာများကိုရေးပါ၊
ubuntu နှင့်အရသာများ (ကျွန်ုပ်တို့သည်အတန်းထဲတွင်သုံးသောကြောင့်)
mint (ငါ linux သို့ပြောင်းသောအခါ)
Debian တည်ငြိမ်မှု (ကျွန်ုပ်၏အိမ်နှင့်အလုပ်လက်တော့တွင်ကျွန်ုပ်၏ကိုယ်ပိုင်ရွေးချယ်မှု)
နောက်ဆုံးမှာငါ debian နဲ့ကပ်နေတယ်၊ ​​ဘာလို့လဲဆိုတော့ငါ့မှာ versionitis မရှိဘူး၊ update မရတဲ့ update တွေမရတဲ့တည်ငြိမ်တဲ့ system ကိုငါလိုချင်တယ်။
ငါအရင်ဆုံးသုံးခဲ့တဲ့အချိန်မှာ Ubuntu ဆိုတာ Karmic Koala version (၉.၁၀) ဖြစ်တယ်ဆိုတာမှတ်မိတယ်။ အဲဒီနောက်ငါသူတို့ကိုဘယ်လိုအဆက်အသွယ်တွေရတယ်ဆိုတာမှတ်မိတော့မှာမဟုတ်ဘူး။ သူတို့ကိုအချိန်အကြာကြီးကောင်းကောင်းထားနိုင်ခဲ့တယ်၊ နောက်ဆုံးတော့၊ သူကကျွန်တော့်ကိုသူပြောလိုက်တာက \_ t
Ubuntu (Kubuntu၊ Lubuntu၊ Xubuntu)
Linux Deepin (ဒီဟာကောင်းတယ်၊ သူတို့ကကောင်းကောင်းအလုပ်လုပ်ခဲ့တယ်ထင်တယ်)
အသုံးပြုမှုနှင့်စမ်းသပ်မှုတို့ကိုခွဲခြားရန်လိုအပ်သည်။ ငါသုံး Ubuntu, Debian နှင့် Fedora သုံးခဲ့တယျ။ ငါနာရီ, ရက်သို့မဟုတ်ရက်သတ္တပတ်အနည်းငယ်ပင် install လုပ်ပြီအခြားသူများစွာရှိပါတယ်, ဒါပေမယ့်ပုဂ္ဂိုလ်ရေးအရဒီဖြန့်ဖြူးရုံစမ်းသပ်ခြင်း "ဖြန့်ဖြူးအသုံးပြုသည်" မစဉ်းစားပါ။ ပြီးခဲ့သည့်နှစ်တွင်ထို ၂၃ ခုမှမည်မျှအသုံးပြုခဲ့သနည်း။
Ubuntu, linux Mint, Crounchbang, Archbang, Archlinux, Debian, OpenSUSE, elementary OS, Puppy Linux, Meego ။ အလွန်နည်းသည်၊ သို့သော်ထိုသူအပေါင်းတို့ကိုငါအပြည့်အဝသိရှိသည်ဟုကျွန်ုပ်တစ်ခါမျှမပြောခဲ့၊ ကျွန်ုပ်သူတို့ကိုမှန်ကန်သောအရာကိုရှာဖွေရန်ကြိုးစားခဲ့သည်ဟုပြောခဲ့သည်။ အသုံးပြုခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်း၊ ထည့်သွင်းခြင်း၊ liveCd, virtualbox စသည်တို့ ...
မင်းကိုတွေ့ရင် ၅ မိနစ်လောက်တောင်မှမင်းကိုသုံးတယ်။
၃- suse linux
9.- ခွေးကလေး linux
၁) Ubuntu 1, 7.10, 8.04
၂) Kubuntu ၈.၁၀
၇) Slackware ၁၃.၃၇၊ ၁၄.၀၊ ၁၄.၁ (လက်ရှိ)
- မူလတန်း OS
Mint (debian နှင့် Ubuntu)
ငါကျောင်းမှာပြတင်းပေါက်အမြဲတမ်းရှိရာသို့အချိန်တိုအတွင်းမှာငါအချို့ကိုသုံးခဲ့ပေမယ့်ယခုငါမူလတန်း Os ကိုစမ်းသပ်နေပြီး၎င်းသည်အတော်လေးကောင်းသည်အခြား C ကိုဆက်ကြိုးစားကြည့် ဦး မည်။
Gio Dgo သို့ပြန်သွားပါ
ငါအရှည်ဆုံးအသုံးပြုခဲ့ကြသောအရာများသည် (အမြင့်ဆုံးမှအနိမ့်ဆုံးသို့) -
Mint (အိမ်တွင်၊ ကျွန်ုပ်နေ့စဉ်သုံးဆဲ)၊ Mandrake, Slackware, Ubuntu 10
ငါတာဝန်ကျေပွန်မှုမရှိဘဲခေါင်းကိုက်ခြင်း (အလုပ်) ကိုသာဖြစ်ပေါ်စေသည်။
Fedora (၁၇၊ ၁၈၊ ၁၉ နှစ်)
နောက်ဆုံးတော့ကျွန်တော်ထည့်သွင်းပြီး ၇ ရက်ထက်နည်းတဲ့သူကအဲဒါကိုပြန်မသွင်းခင်မှာ -
Ubuntu (စည်းလုံးမှုကိုဆောင်ကြဉ်းရန်ပထမဆုံးပုံစံ)၊ Manjaro, Debian, Gentoo, Puppy, Conectiva, Knoppix, SUSE, Kubuntu, Lubuntu, (-BUNTU တွင်အဆုံးသတ်ကိုထည့်သွင်း), Mageia
QNX (၁.၄၄mb disk ထဲ၌ထည့်သွင်းနိုင်သည့်ဗားရှင်း)၊ ၉၀ ပြည့်လွန်နှစ်များနှောင်းပိုင်းတွင်စက်အဟောင်းတစ်ခုတွင်၎င်းကိုငါကြာမြင့်စွာသုံးခဲ့သည်။ ဘာကြောင့်လဲကျွန်တော်မသိပါဘူး။ ဒါပေမယ့်ငါဘာမှနောင်တမရဘူး!
Windows7ကျွန်ုပ်သည်ဗီဒီယိုဂိမ်းအချို့ကစားလိုသည်။ ကျွန်ုပ်သည်အပြစ်ရှိကြောင်းဝန်ခံသည်။
ငါလည်းလုပ်ပြီးပြီ။ ငါ Halo … XD ကိုမကစားနိုင်တော့ဘူး
လွန်ခဲ့သော ၃ လက Linux ကိုသုံးသည်။ သို့သော်ယခုအချိန်အထိကျွန်ုပ်သည် ubuntu, mint, eOS, archbang, debian, bodhi ကိုကြိုးစားပြီးယခု snowlinux ကိုကြိုးစားတော့မည်။
Ubuntu၊ Xubuntu၊ Kubuntu
ကြည့်ကြရအောင်။ ငါဒီမှာသုံးခဲ့တဲ့ PCLinuxOs, Fedora, Linux Mint, Ubuntu, Debian, Crunchbang, Archlinux, Manjaro, Puppy Linux, Slitaz, Sabayon, Lubuntu, CentOS, Slax, OpenSuse, Archbang နှင့် Knoppix: D!
မတူကွဲပြားမှုများကြောင့်ရွေးချယ်မှုများစွာရှိခြင်းအတွက်ဗားရှင်းရောဂါကူးစက်မှုသည်ပြ,နာတစ်ခုဖြစ်သည်။ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်၏သက်တောင့်သက်သာဖြစ်သောခံစားမှု (Ubuntu, Crunchbang နှင့် Sabayon): D!
PS: ယခုကျွန်ုပ်သည် Virtualized W8.1 တွင်၎င်း၏လုပ်ဆောင်မှုများကိုစမ်းသပ်ပြီး .NET ပရောဂျက်များအတွက် VStudio 2013 ကိုအသုံးပြုသည်။
kernelcrash ဖြစ်သည် ဟုသူကပြောသည်
ကောင်းပြီ ... ကျွန်တော့် PC ၏ hard drive ပေါက်ကွဲပြီးသောအခါ Live mode တွင် Linux ဖြန့်ချိမှုအကြောင်းကြားခဲ့ရသည်၊ ထို့ကြောင့်ကျွန်ုပ်သုတေသနပြုခဲ့သည်။ ပထမဆုံးတွေ့ရတာက Ubuntu ပါ။ ဒါပေမယ့်ကျနော့် PC အတွက် P4 က 256 RAM ပါ။ ပြီးတော့ Slax, Slitaz, Puppy Linux နဲ့အတူနောက်ဆုံးမှာတော့ဆုံးဖြတ်ဖို့ဆုံးဖြတ်ခဲ့ပါတယ်။
Hard Drive ကိုအသုံးပြုပြီး Puppy Linux ကို install လုပ်တယ်။ ArchLinux အကြောင်းကြားရတယ်၊ ArchBang ... xD ကိုငါ install လုပ်တယ်။
လောလောဆယ်ငါ ArchBang (ငါ့အကြိုက်ဆုံး), Slackware 14 (ငါ့အကြိုက်ဆုံး xD) နှင့် Debian (ငါဂရပ်ဖစ်ပတ်ဝန်းကျင်တစ်ခုလုံး ... xD ကိုပြုပြင်ရန်နှင့်တပ်ဆင်ရန်လိုအပ်သည်) ကိုအသုံးပြုသည်။
Android သည် GNU + Linux ဖြန့်ဝေမှုမဟုတ်ပါ။ ၎င်းတွင်အလွန်အခြေခံကျသည့် Linux core တစ်ခုဖြစ်ပြီး Bionic ဟုအမည်ပေးထားသောကိရိယာတန်ဆာပလာများနှင့်ပြုစုသူဖြစ်ပြီး၎င်းသည် Dalvik ဟုခေါ်သောဂူဂဲလ်၏ Java virtual machine ၏မူပိုင်ဖြစ်သည်။
သင်အမည်ပေးသည့် distros များမှဂရပ်ဖစ်အလွှာကိုသာကြည့်ခြင်းအားဖြင့်သူတို့ကိုသင်စမ်းသပ်သည်ဟုယူဆသည်၊ ဆိုလိုသည်မှာ user interfaces ။ GNU + Linux operating system တွင်အမှန်တကယ်အရေးကြီးသည်မှာ graphical desktop အခြေခံ၏အခြေခံအဆောက်အအုံဖြစ်သောကြောင့်၎င်းဖြန့်ဖြူးမှုအားလုံးကိုသင်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ပြီးကြောင်း system level တွင်ပြုလုပ်သည့်အခါသင်အမှန်တကယ်စမ်းသပ်ပြီးကြောင်းသင့်ကိုကျွန်ုပ်ယုံကြည်သည်။ လွတ်လပ်စွာပုံတူကူးယူနှင့်မည်သည့်ဖြန့်ဖြူးအတွက် 100% ။
ဟုတ်ကဲ့၊ သူတို့ပုံပန်းသဏ္forာန်အရကျွန်တော်သူတို့ကိုထည့်သွင်းခဲ့တယ်။ အချို့ကတော့ Mac OS X လိုမျိုးကြိုက်နှစ်သက်ကြတာ၊ Android က၎င်းကိုဘယ်လို download လုပ်တယ်ဆိုတာကိုဒေါင်းလုပ်လုပ်ပြီး install လုပ်လိုက်တယ်။ ငါစိတ်ဝင်စားတာတွေ့ပေမယ့်မိနစ်အနည်းငယ်လောက်ပဲ။
ငါအနည်းငယ်နှိုက်နှိုက်ချွတ်ချွတ်အသုံးပြုခဲ့ကြသည်။ ဒါပေမယ့်သူတို့ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါသူတို့ကိုတပ်ခဲ့တယ်၊ သူတို့ကိုငါတွေ့ခဲ့တယ်၊ ငါမကြိုက်ဘူး၊ နောက်တစ်ခုကိုငါဆက်သွားခဲ့တယ်။ ဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ငါက network administrator၊ အင်ဂျင်နီယာဒါမှမဟုတ်အဲဒီလိုအရာအားလုံးမဟုတ်ဘူး။ တကယ်တော့ငါလေ့လာနေတယ်။ စပိန်ဆရာ XD ဖြစ်ရန်။ ကျွန်ုပ်သည်သာမာန်အသုံးပြုသူတစ် ဦး ဖြစ်ပြီးကျွန်ုပ်နှင့်တူသောသူများကဲ့သို့ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းမည်သို့အလုပ်လုပ်သည်ထက်ကြည့်ရှုရန်ကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုစိတ်ဝင်စားသည်။
Lubuntu - LXDE ကိုတွေ့ပြီး laptop ကိုသေခြင်းကနေကယ်တင်ခဲ့တယ်
ငါ distros ၁၀ ခုလောက်သုံးပြီးပြီ။ ကျွန်တော့်အတွက် Linux Mint, Ubuntu, Lubunt, Kubunt နဲ့ Xubunto အတူတူပဲ။ Base system တစ်ခုထားပါ၊ repositories ထားပါ။
ဒါဟာကျွန်တော့်အတွက်အချိန်ယူခဲ့တယ်။ ဒါပေမယ့်ငါ Gentoo နဲ့ရှာဖွေတာကိုအဆုံးသတ်လိုက်တယ်၊ အကြိုက်ဆုံး distro အဖြစ်၊ အနာဂတ်မှာငါ Funtoo သုံးမယ်။
Ubuntu, PuppyLinux, Mandriva, Fedora, Opensuse, Kubuntu, LinuxMint Mate, LinuxMint Cinamon, LinuxMint Debian Edition နှင့် LinuxMint KDE တို့အသုံးပြုသော distro မည်မျှရှိသနည်း Odair ၏အဖြေကိုမေးရန်။ သူငယ်ချင်း google and ai busgueda bar တွင်ကျွန်ုပ်ပြdistနာကိုတစ်စုံတစ် ဦး ကသတ္တုတွင်းနှင့်တူညီသောပြhadနာရှိသလားဆိုတာကိုသိရန်ကျွန်ုပ်၏ပြproblemနာကိုကျွန်ုပ်ဖြေရှင်းလိုက်သည်။ ကျွန်ုပ်ယခုဖြေရှင်းနေသည်မှာကျွန်ုပ် LinuxMint KDE 17 ကိုအသုံးပြုနေသည်။ LinuxMint တွင်ဗားရှင်းအသစ်တစ်ခုကိုကျွန်ုပ်တို့စောင့်နေစဉ်တွင်အသစ်သောအရာသည်ကျွန်ုပ်တို့အားနောက်ခံပုံအသစ်နှင့်ဗားရှင်းနံပါတ်အသစ် မှလွဲ၍ အခြားအရာများမတွေ့ရသော်လည်း Snow White နှင့် Dwarfs Linux distro 7
ငါ linux ကို antiX နဲ့စလုပ်တယ်။ သူတို့ပေးတဲ့ pc ပေါ်မှာ။ ငါသည်လည်းအခြားစက်ပေါ်တွင် Arch ကိုကြိုးစားသော်လည်း၊ စားပွဲခုံတွေအတွက်တော့ Icewm နဲ့စခဲ့တယ်။ ငါ lxde ကိုပြောင်းခဲ့တယ်။ အဲ့ဒီကနေငါ lxde, openbox, lxde window manager ဆိုတဲ့အနှစ်သာရနဲ့နေခဲ့တယ် xml of openbox (၄၀၀- ထူးဆန်းသောလိုင်းများ၏၊ ကျွန်ုပ်အားအရာအားလုံးကိုပြန်လည်ရေးပြီး၎င်းကို ad nauseam ကိုပြုပြင်ပြီးပြီ) ။ ထိုအရပ်မှကျွန်ုပ်မရွေ့နိုင်ပါ။ ထို့အပြင် crunchbang ကိုတပ်ဆင်ခြင်း၏အချက်ကိုလည်းကျွန်ုပ်မမြင်ပါ။ ပုံသေသတ်မှတ်ထားသည့်ပုံစံများ၊ ပုံမှန်စနစ်များပိုမိုလွယ်ကူစွာတပ်ဆင်ခြင်းထက်ပုံမှန် debian နှင့် openbox ကို install လုပ်ခြင်းသည်ပိုကောင်းသည်။
uux ငါ linux မှစတင်ခဲ့သည်။ ၎င်းသည် Esware ဟုခေါ်သော distro ဖြင့်မွေးဖွားလာသောအခါ KDE မှအောင်နိုင်သော ubuntu စကြာ ၀ arrivedာသည်ရောက်ရှိလာပြီး openuse ပိုကောင်းသည့် kubuntus ဗားရှင်းအားလုံးသည်၎င်းတို့ကိုဆာဗာအချို့တပ်ဆင်ထားကြပြီး apt ထက်သာသည်။ of rpm of last နောက်ဆုံးအဆုံးမှာတော့သူတို့ကငါ့ကိုဘယ်တော့မှ update မလုပ်ခဲ့ဘူးဒါကြောင့် fedora နဲ့ mandriva ကငါ့ဘေးမှာသိပ်မကြာခဲ့ကြဘူး။ ဒါကြောင့်ငါပေါ့ပ် einghterment လို linux ပေါ့ပါးတဲ့ version အချို့ကိုငါသဘောကျမိတယ်ဒါပေမယ့်ဒီတော့ထူးဆန်းနေတယ်။ lts of kubuntu ကဘာလို့လဲဆိုတော့ပလာစမာဗားရှင်း ၅ မှာမအောင်မြင်တာ၊ ဖိုလ်ဒါတွေဆက်မဖွင့်တာကြောင့် ၁၄.၀၄ ကိုပြန်သွားပြီး၊ ကျွန်မရဲ့ဇာတ်လမ်းကိုပြန်ရေးနေတယ်။ ဒီနေ့ i16.04 pentium5ကနေငါ့ 14.04-core Amd linux နဲ့အတူရှိနေပြီ၊ , lubuntu xubunu, mint version, debian နှင့် ubuntu, ဒါပေမယ့်ငါသူတို့ပြောတာက linux distro ကိုငါကြိုက်တဲ့အတိုင်းပြောင်းလဲလိုက်ပြီး XD ကိုကစားနိုင်ခြင်း မှလွဲ၍ ဂိတ်များအကြောင်းမေ့ခဲ့သည်။
DesdeLinux အတွက် Captcha Anti Spam စနစ်အသစ်
GNU / Linux နှင့်အတူကျွန်ုပ်မိသားစု - geek's blog